ကျနော့် ချစ်သူ အတွင်းရေးမှူး မမ – Grab Love Story
ကျနော် နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတော့…..။ အလုပ်တွေ လိုက်လျှောက်တယ်ဗျာ…….မကိုလည်း လွမ်းနာကျ..။
နိုင်ငံခြားမှာလည်း ဆယ်နှစ်ကျော်လာတော့ ပျင်းလာလို့ ဆိုပြီးတိုင်းပြည် ပြန်လာခဲ့တာ…..။
နိုင်ငံခြားက လစာရဲ့ သုံးပုံ ပုံ တပုံလောက် ရရင် လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားတာ………..
မြန်မာပြည်က လူတွေကို တကယ်လည်း အံ့သြမိတယ်……….. ဒီလောက် ဈေးကြီးတဲ့ ကုန်ဈေနှုန်းကို လစာနည်းနည်းလေးနဲ့ တောင့်ခံထားတာ……. အတော်လေး ချီးကြူးမိပေမယ့် စိတ်ထဲကတော့ တကယ် ဂရုဏာ သက်မိတယ်…..။ ကံကောင်းတယ်ဘဲ ပြောရမလား မသိဘူး…………FDI ကုမ္ပဏီ တခုက
မြန်မာပြည်မှာ invest လုပ်ပြီး ကုမ္ပဏီ အသစ်တဲ့။ သွားပြီး အင်တာဗျူးလုပ်တာ အောင်သွားတယ်……
အဓိကကတော့ အင်္ဂလိပ်လို နည်းနည်း ပါးပါး ပြောတတ်ပြီး………. လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အများကြီး ရှိလို့ပါ…..။ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ခန့်မှန်းထားတဲ့ လစာထက် ပိုများတယ်..။ အခြား Facility လည်း
ရသေးတယ.်…..။ ကျနော်က လည်း နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေ အကြောင်း နားလည်တော့…။ နယ်ကလူဆို အိမ် စီစဉ်ပေးမယ် ထင်ပြီး တောင်းလိုက်တာ ရသွားတယ်……။
ကားလည်း ပေးတယ်………ခက်တာက ကျနော် ကားမမောင်းရဲဘူး………..ဗျ
ရာထူးကတော့ Country Manager…ဆိုတော့ မြန်မာပြည် အတွက် အကြီးဆုံးပေါ့ဗျာ….အဲဒီ အချိန် ကျနော့် အသက်က ၃၀ ဘဲ ရှိသေးတယ်…..။
ဒီလိုနဲ့ ….ကျနော့် အလုပ် အတွက် Plan တွေ ဆွဲ…..ရုံးခန်းလည်း ရှာ. အလုပ်ကတော့ အရမ်းရှုပ်ပေါ့ဗျာ…..လူတွေ ခေါ်ဖို့ အတွက်လည်း… ပြင်ဆင်…သတင်းစာထဲမှာ ကြေငြာထည့်…….
ကျနော်ကို ငှားပေးထားတဲ့ လုံးချင်း အိမ်မှာ ကျနော် တစ်ယောက်တည်းလေ…..။
အင်တာဗျူးလုပ်တော့ လာလိုက်ကြတဲ့ လူတွေ အများကြီးဘဲဗျာ..။ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီကလစာ ကောင်းတယ်
ဆိုလို့ လာလျှောက်ကြတာ….ဒီစာဖတ်တဲ့ အထဲတောင် ပါအုံးမလား မသိဘူး….. ဆောရီးပါဗျာ………. အဲဒီတုန်းက ကျနော် နှာဗူးကျခဲ့လို့ တချို့ဆို တော်လျှက်နဲ့ အရွေးမခံခဲ့ရဘူး……..။
စာလည်း ဖတ် ပညာလည်း ရအောင် နည်းနည်း ရေးပြရင်းနဲ့ စာရှည်သွားမှာလည်း စိုးရိမ်ရတယ်….။
ဖြတ်ပြီးဘဲ ပြောလိုက်တော့မယ်ဗျာ…..။အဓိကကတော့ အတွင်းရေးမှူး အရင် ရှာရတာဘဲ… ဒါမှ ကျနော့် အတွက် ဝန်ပေါ့မှာ ဆိုတော့..။လာလျှောက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကို အကုန်မေးတယ်..။. မြန်မာဝတ်စုံ ဝတ်လာတဲ့ ကောင်မလေးတွေ…ရှက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေ ဆို………ကျနော် အင်တာဗျူးလုပ်တာ ဆယ်မိနစ် မကြာဘူး…။ခေတ်ဆန်ဆန်နဲ့…အပြောအဆို ရဲတဲ့ ကောင်မလေးတွေနဲ့ဆို အင်တာဗျူး လုပ်တာ
ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံး ဆယ်ခါတင် ၅ ယောက်ကို second အင်တာဗျူး ခေါ်လိုက်တယ်…….။
မခေါ်ခင် စိတ် စမ်းလိုက်တယ်..။ ကျနော် အလုပ်များနေလို့ ဒီကို အင်တာဗျူး မတိုင်ခင် စနေ တစ်ရက်လောက် လာကူပေးပါလားဆိုတော့..။ ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး နှစ်ယောက်က NO တဲ့.
.နောက် နှစ်ယောက်ကတော့ အင်တင်တင်ဘဲ..။ ကျနော့် အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်လာမယ့်တစ်ယောက်ကတော့
သူက ပေးဆပ်ခြင်းနဲ့ စ လို့ ကျနော်သူ့ကို ၈၅ % ရွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…။ ဒီလိုနဲ့ ချိန်းထားတဲ့
စနေနေ့ ရောက်တော့….မမ ရောက်လာတယ်…။ ကျနော်လည်း အလုပ်လျှောက်လာတဲ့ ဖိုင်တွေထဲက
သူ့ရာထူးနဲ့သူ အဆင်ပြေမယ့်သူလေးတွေကို ရွေးထုတ်ခိုင်းတာပေါ့….။ မမက အရင်က HR မှာလည်း
လုပ်ဖူးတော့ လုပ်တာ မြန်တယ်ဗျာ……..နှစ်နာရီလောက် လုပ်လိုက်တော့ ပြီးသွားတယ်……….။
အဲဒီအချိန်ကတော့ ………..ငွေကလည်း ပေါ.
တစ်ယောက်တည်း သမားဆိုတော့ ပိုက်ဆံလည်း သိပ်မနှမြောတတ်ဘူးလေ…………။
မ က မနက် အစောကြီး ရုံးကို ရောက်လာတယ်…….ကူညီပေးစရာရှိလုပ်ထားပေးရအောင်တဲ့…။
ဒီနေ့လည်း မကို ကြည့်ရတာ လှနေတာဘဲ……..သတိထားမိတာက အပေါ်က ကုတ်အကျီလေးက မပြောင်းသွားဘူး….
ဘယ်သူမှလည်း မရှိတော့ ……..မကို နမ်းခွင့်တောင်းပြီး ကစ်စင် ပေးလိုက်တယ်……။
နောက် အင်တာဗျူး စလုပ်တယ်………..။
ထုံးစံ အတိုင်း အတွင်းရေးမှူးတွေ လုပ်ရမယ့် အသေးစိတ် အလုပ်လေးတွေ ရှင်းပြတယ်…….
နယ်လည်း တခါတလေ သွားရမယ်……… ညဘက် ဒင်နာတွေ ဘာတွေရှိရင် လိုက်တက်ပေးရမယ်……
အပြောအဆို အမူအယာလည်း ရဲရင့်ရမယ် ……. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နဲ့ လူမှု ဆက်ဆံရေးလည်း ကောင်းရမယ် ဆိုတော့….
နှစ်ယောက်ကတော့ နယ် မသွားနိုင်ဘူးတဲ့………..
နောက်တစ်ယောက်ကလည်း…………နယ်တော့ သွားနိုင်ပါတယ် ၊ သူ့အတွက် မိန်းကလေး အဖေါ်ပါရင်တဲ့……..
တစ်ယောက်တော့ အစ်ကို က လူမှု ဆက်ဆံရေး ပွင့်လင်းရမယ် ဆိုတာ ဘယ်လောက် ပွင့်လင်းရမှာလည်းတဲ့…….
သူလေးလည်း ချစ်စရာလေးဘဲ……………… ဒါနဲ့ သူနဲ့ စကားတွေ အများကြီး ဆက်ပြောဖြစ်တယ်………
ရာထူးအတွက်က မ အတွက် လျာထားပြီးသား ဖြစ်နေလို့ ……… သူကို စိတ်ကျေနပ်အောင် စကားတွေ ထိုင်ပြောဖြစ်တဲ့ သဘောပါဘဲ..
စကားပြောရင်းက သူက သူ့ ကလပ်တွေလည်း တက်………….. နည်းနည်း ပွေချင်တာလေးတွေ သိလာရတယ်….။
ခဏနေတော့ သူနဲ့ စကားလက်စသတ်ပြီး…………. ဒီအလုပ်နဲ့ မဟုတ်တောင် အပြင်မှာ မိတ်ဆွေတွေ လုပ်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းရယ်…………… ဒီည အတွက် ညစာကျွေးမယ်လို့ သူ့ကို ဒိတ်လုပ်လိုက်တယ်……..။
နောက်တော့ မ အလှည့်……………
မနဲ့ကတော့ နည်းနည်း ရင်းနှီးပြီးသား ဆိုတော့ …..ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘဲ…………….. ပြောဖြစ်တယ်….
မ လစာ ဘယ်လောက် လိုချင်လည်း…………. ဆိုတာ ညှိပေးမယ်….နောက် မ အတွက် လုပ်ရမယ့် အလုပ်သဘောတရားတွေကို သေချာ ရှုင်းပြတယ်..။
ကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အတွင်းရေးမှူးမမလေး ရှိတာ အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုပျော်တယ်ဗျ……….
တကယ်ပြောတာ……….. လုပ်ငန်းခွင့် တိုးတက်ချင်ရင်………… ဘေးမှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့ လူတွေ ရှိနေရင် ပိုကောင်းတယ်….။
ပြောစရာရှိတာ ပြောပြီး………………..မကို မနေ့က ဝယ်ထားတဲ့ ဖုန်းလေး ထုတ်ပေးတော့…….
မ အရမ်းပျော်သွားတဲ့ ပုံစံလေး……….ပြီး မှ အားနာတဲ့ ပုံစံနဲ့…….မောင်လေးကလည်းကွာ……….
အလုပ်ခန့်လိုက်ပြီဘဲ………………… ကျနော်နဲ့ စကားအမြဲတမ်း ပြောဖို့ အတွက်ရယ်
ဆက်သွယ်ရတာ လွယ်ဖို့ အတွက်ရယ် ဖုန်းရှိမှ ဖြစ်မှာလေ………….။
စကားသာ ထိုင်ပြောနေရတာ မကို အခန်းထဲ ခေါ်ပြီး ဆွဲချင်လှပြီ
မကို ဖက်ထားပြီး အချစ်အကြောင်းတွေ ပြောမိသေးတယ်……….
ခဏနေတော့ ကစ်ဆင် ထပ်ဆွဲပြိး နှစ်ယောက်လုံး လိုလားတဲ့ အရာကို စတင်လိုက်တယ်…..
ကျနော်လည်း တခါမှ မလုပ်ဘူးသေးလို့ စမ်းကြည့်ချင်နေတာ
အလုပ်စားပွဲပေါ် မတင်ပြီး…သူ့ စကဒ်လေး လှမ်းပြီး ဂျာတဲ့ အရသာ………တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ
ပင်တီလေးတောင် မချွတ်ဘူး……………. ဆွဲလှန်ပြီး ဂျာတော့သာ
မက လူသာ မချမ်းသာတာ………………… သန့်နေတာဘဲဗျာ………
အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို ဆွဲဟပြီး အတွင်းသားလေးကို စိတ်ပါလက်ပါ လျှာနဲ့ လျှက်ပေးမှတော့
ဘယ်ခံနိုင်မှာလည်းးဗျာ………..ကျနော့် ဆံပင်ကို ဆွဲကိုင်ပြီး မရဲ့ ခါးက ကော့ကော့တက်လာတာ…………….
အဲဒီ အခွေကို ခုထိ ပြန်ကြည့်ရင်းဖီးတက်နေတုန်းဘဲ………..
နောက်တော့ ကျနော်လည်း မနေနိုင်ဘူး……….သူ့ကို စားပွဲပေါ်မှာဘဲ လိုးလိုက်တယ်………
ပထမ အစတော့ နာတယ်တဲ့………….နောက်တော့ သူလည်း အရမ်းကောင်းလာလို့နဲ့ တူပါတယ်…..
မက အရမ်းအော်တယ် သိလား…………….လုပ်ရင် အော်တတ်တဲ့ ဆော်တွေကို လိုးရတာ ပိုပြီး ဖီးလ်ရှိတယ်………။
အဲဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရ သုံးခါလောက် လုပ်လိုက်တယ်……….
ညနေစောင်းတော့ ထုံးစံ အတိုင်း ညစာ အတူသွားစားမယ် ဆိုပြီး မ ရဲ့ အိမ် အတွက်ပါ……… ဝယ်ပေးလိုက်တယ်
ဆိုင်မှာ မကို ဖုန်းသုံးပုံ သုံးနည်းလေး နည်းနည်း ပါးပါး ပြပေး……..အိမ်ထိ ပို့ပေးပြီး…………. ကျနော် ပြန်လာခဲ့တယ်…….။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှ……………… စော်လေးနဲ့ ညစာစားမယ်လို့ ချိန်းထးတာ သတိရပြီး.
သူ့ကို ဖုန်းဆက်…..အလုပ်များနေလို့ပါ ဆိုပြီး တောင်းပန်………. အခုလာပြီ ဆိုပြီး သူ့ဆီ အမြန် ပြေးသွားရတယ်……။
သူက…… ဘဲကင် စားချင်တယ်ဆိုတော့ ……….နီးနီးနားနား.က ရွှေဘဲမှာဘဲ သွားထိုင်လိုက်တယ်
ဘဲကင် တခြမ်းမှာပြီး ကျနောက် ဘီယာသောက်တော့ …………သူလည်း သောက်မယ်တဲ့.
ဒီကောင်မလေးကလည်း တော်တော် ချစ်စရာ ကောင်းတာ……….ဘဲနဲ့လည်း ကွဲသွားတာ သိပ်မကြာသေးဘူး
သူ့ဘဲက နိုင်ငံခြား သွားလို့သာ ကွဲသွားတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ……။
သူလည်း သောက်နိုင်သားဗျာ……………..တစ်ယောက် သုံးလုံးလောက် ကုန်တော့
ကလပ် ကို ဆက်သွားမယ် ဆိုပြီး သွားကြတယ်
ကျနော်က မကတတ်ဘူးဗျာ……သူက ကချင်တယ်ဆိုလို့ သူ့ကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး…….
ကျေန်ာက ပုလင်းထောင်လိုက်တယ်…..။ ထုံးစံအတိုင်း စားပွဲမှာ ပုလင်းထောင်ထားပြီဆို မိန်းကလေးတွေက
ကျနော်လည်း ပျင်းတာနဲ့ လာထိုင်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ တော်ကီပွားနေတော့………မရွှေချောက ရောက်လာပြီး……….
ဒါနဲ့ ကျနော်က……ချစ်လေးကလည်းကွာ………..ကိုကိုက ရိုးရိုးစကားပြောတာပါ………….စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဆိုပြီး ခေါင်းတွေ သပ်ပေးလိုက်တော့ ငြိမ်သွားတယ်………။
ဒါနဲ့ နှစ်ယောက် ထိုင်ပြီး ဆက်သောက်……..
ဘယ်ပြန်မှာလည်း…… ကိုကို လိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုတော့
ဒီအချိန်မှတော့ အဆောင်လည်း ပြန်ဝင်လို့ မရတော့ဘူး……… ကိုကို သွားတဲ့ နောက် လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့………..
ပြသနာက အဲဒီမှာ စတာ…………. driver ပါနေတော့ အိပ်ကို မခေါ်သွားချင်ဘူးလေ………
ဒီလိုလုပ် ချစ်လေး……ကိုကို ဟိုတယ်မှာ အခန်းယူပေးထားမယ်……….ကားသွားထားပြီးရင် ကိုကို ပြန်လာခဲ့မယ်
ဒီလိုနဲ့ အပြန်လမ်းကြမှ မ ကို ဖုန်းဆက်ဖို့ သတိရတယ်…….
ဒီအချိန်ကြီး ဆက်ရင်လည်း မကောင်းပါဘူး ဆိုပြီး…….
sms အတိုလေး လှမ်းပို့လိုက်တယ်………….အလုပ်များနေလို့
ဖုန်း မခေါ်ဖြစ်တာ ..အိပ်နေပြီလား ဆိုတော့…………….
သူ့ဆီက ချက်ခြင်း ဖုန်း ပြန်ဝင်လာတယ်…………
မောင်လေးဆီက ဖုန်းကို စောင့်နေတာတဲ့…………..
ဒါနဲ့ သူ့နဲ့ ခဏဖုန်းမှာ ကြွေပေးတော့ ကားဆရာက ပြုံးစိစိနဲ့………
ဒါနဲ့ driver ကို မုန့်ဖိုး ပေးပြီး တက္ကစီနဲ့ ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်………..။
ကျနော်လည်း သူ့ထွက်သွားတာနဲ့ တံခါး ပိတ်ချင်ယောင်ဆောင် ၊ သူလည်း ပျောက်သွားရော………… ချစ်လေးဆီ ပြန်ပြေးရတာ….။
မောလို့ မောမှန်းတောင် မသိဘူး……………..ဇောကပ်နေတာကိုး…………..
ဟိုတယ်လည်း ရောက်ရော…….သူ့အခန်းကို ကမန်းကတန်း ပြေးရတယ်
တော်ကြာ အိပ်ပျော်သွားရင် နေကောင်းသွားမှာ စိုးလို့လေ…………..။
ကိုကိုပါ ဆိုမှ ဖွင့်ပေးတော့ သဘက်လေး ပတ်ထားသူ……..ရေချိုးခန်းထဲမှာ မျက်နှာသစ်ပြီး ထွက်လာတာတဲ့…..
သူက ရယ်ဒီဆိုတော့ ကိုယ်လည်း အဆင်သင့်ဘဲပေါ့……….
သူ့ကို ဖက်.ကစ်ဆင်လေး ဆွဲပြီး………….ခုတင်ပေါ် ပက်လက် လှန်ခိုင်းလိုက်တယ်………..
ချစ်တော် ချစ်တဲ့ ပထမဆုံးမမ သင်ပေးလိုက်လို့……………….. အခုဆို မနေနိုင်ဘူးဗျာ………… မဂျာရရင် မပြည့်စုံသလိုဘဲ……..။
သူက ပြောတယ်……… မဂျာဘဲ လုပ်ရင် ဖီးလ်အပြည့်လာဖို့ မလွယ်ဘူးတဲ့……..ချစ်တဲ့ စိတ်ကြောင့်သာ လိုက်လျောပေးလိုက်ရတာ
သူ့တို့ ဖီးလ် အပြည့်ရဖို့ ဂျာပေးမှ ပိုကောင်းတာတဲ့………။
သူက အမွှေးလေးတွေ ရိပ်ထားတာဗျ……….. အမွှေးရိတ်ထားထားလို့ ကြမ်းရှရှနဲ့ကလည်း တမျိုး အရသာ ရှိတယ်………
အစိလေးကို စုပ်ပေးလိုက်………..အတွင်းသားလေးကို လျှာလေးနဲ့ ထိုးလိုက်……… အပြင် နှုတ်ခမ်းကို ပွတ်ဆွဲလိုက်နဲ့…….
အစိကို စုပ်ရင် အရမ်း မစုပ်နဲ့…..နာတတ်တယ်……………..ခပ်ဖွဖွလေး စုပ်ပေးပြီး…………… လျှလေးနဲ့ ပွတ်ပေးကြည့်.
ဘယ်မိန်းမ မ တောင့်မခံနိုင်ဘူး………..
ခဏလေးနေတော့ သူ့ ဆတ်ကနဲ ဆက်ကနဲ တွန့်သွားပြီး……………ပြီးသွားတယ်………….
သေချာတယ် ဒီစော်လေး ဒီကိစ္စ အတွေ့အကြုံနည်းသေးတယ်………ဒါမှ မဟုတ် သူ့ဘဲက ကောင်းကောင်း ပြုစုတာ မခံဘူးတဲ့ သူဘဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဒတ်ထိ သိလိုက်ပြီလေ……….။
ဒါနဲ့ သူဘေးနားမှာ ဝင်လှဲပြီး ကစ်စင် ဆွဲလိုက် ……….နို့အုံလေးချေလိုက်နဲ့ …….တစ်ယောက်တည်း အလုပ်များနေတုန်း သူက
ကျုနော့် ကို ပြုစုချင်တယ် ဆိုလို့…………. ခွင့်ပေးလိုက်တယ်………။
သူ မှုတ်တာတော့် တော်တော် ကောင်းတယ်ဗျာ……………… သူ့ဘဲကို လုပ်ပေးနေကြတဲ့…..
သူ့ဘဲကတော့………. အပြုအစု ကျနော့် လောက် မကောင်းဘူး တဲ့……နောက်ပိုင်း သူနဲ့ အရမ်း ပွင့်လင်းသွားမှ ပြန်ပြောပြတယ်…..။
သူ့အဖုတ်လေးကို ဒစ်လေးနဲ့ ပွတ်လိုက်……နို့်လေးကို ဆွဲလိုက်နဲ့………… သူပြန်ပြီး စိတ်အရမ်းပါလာအောင် နူးတော့
သူခါးလေးက အလိုက်သင့်လေး………..လီးကို လိုက်လိုက် တည့်ပေးတယ်………..
စိတ်ထဲက ထင့်ကနဲတော့ ဖြစ်သွားတယ်…………………. သူ့ထဲက အရည်တွေ ကျနေတာတောင်……… ကျနော့်ဟာ မချေင်သွားဘူး.
ဒါနဲ့ မှိန်းပြီး လိုးပေးရင်း…………… က
သူက မြန်မြန်စောင့်ပေးပါ…..တဲ့……………..ကျနော်လည်း အားရပါးရ စောင့်ပေးလိုက်တယ်……။
အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ………. သေချာသွားပြီ………သူပြီးသွားတော့ကျနော့်ကောင်ကို ဆွဲစုပ်နေလို့ ကျနော်လည်း မရှေးမနှောင်းဘဲ…..
သူ့မှာ မျှော့ပါတယ်ဗျာ………. တကယ့် ၇ှားပါး ပစ္စည်း……..။
ကျနော့် တသက် လိုးပေးဘူးတဲ့ မိန်းမ တွေ ရာကျောနေပြီ………….. နှစ်ယောက်ဘဲ မျှော့ပါတာ ကြုံဘူးတယ်…..။
ချစ်လိုက်တာ ချစ်လေးရယ်………..စကားလည်း ပြော ……..သူ့ကို ယုယုယယလေး ထွေးပွေ့ပြီး………. နဖူးလေးကို နမ်းတော့
သူ့ မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်လေးတွေ တွဲနေတယ်……………။
ချစ်လေး ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့………..
သူ့ရည်းစားက သူ့ကို သစ္စာဖောက်သွားတော့ မခံချင်တာနဲ့ သူလည်း ကျနော်နဲ့ အိပ်လိုက်တာတဲ့……
အဲဒီကောင် ဘယ်လောက် အသုံးမကျလည်း ဆိုတာ မသိဘူး……
မျှော့ပါပြီး ဒီလောက် ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ စော်ကို ပစ်သွားတယ်ဆိုတော့ တကယ့် ငတုံးလို့ စိတ်ထဲကတော့ ကျိန်ဆဲမိတယ်…..။
ကိုကို က ချစ်လေးကို အမြဲချစ်နေမှာ ပါ ဆိုတော့………..
သွားပါတဲ့…………လူကို လုပ်ပြီးမှ ရည်စားစကား လာပြောတယ်……….
ပထမ အင်တာဗျူး တုန်းကတော့ မျက်နှာသေကြီးနဲ့တဲ့…………………. ရီလိုက်တယ်……
မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ကို တကယ် ချစ်စေချင်ရင် သူတို့ကို ရီအောင် လုပ်လိုက်……
ဘယ်လောက်ဘဲ စိတ်ကောက်နေတဲ့ ချစ်သူ ဖြစ်ပါစေ………ဟာသတွေ ပြောပြီး ရီအောင် လုပ်လိုက်ရင်………… ပြန်ကြည်သွားတာ မျာတယ်……..။
သူ့နဲ့ စကားပြောရင်းက ဗိုက်ဆာတယ်တဲ့……. ဟိုတယ်ကို လှမ်းမေးကြည့်တော့ မရတော့ဘူးတဲ့.
သူက မရဘူးဗျာ……..ဇွတ်……….ဒါနဲ့ ဘယ်မှ ဒီအချိန် စားစရာ ရနိုင်မလည်း ဆိုတော့ သူက ..သိမ်ကြီးဈေးဘက် မှာတော့ ရလောက်ဆိုလို့ တက္ကစီ ဌားပြီး ပြန်ထွက်ခဲ့ရတသေးတယ်……….
ကားပေါ်ရောက်တော့ ကျနော့် ပုခုံးပေါါ် ခေါင်းလေးတင်ထားတဲ့ သူ့ကို ဖက်ပြီး…….အဖုတ်လေးကို ကားသမာား မသိအေငာ် ထပ်ပွတ်ပေးသေးတယ်……….. ငါး မိနစ်လောက်နေတော့……..သူက လက်ကို အတင်းဆုပ်.နား နားကို ကပ်ပြီး မြန်မြန်တဲ့……
ဘယ်ရမလည်းဗျာ……………….. အမြန်လုပ်ပေးလိုက်တာာာာာာာတွန့်ပြီး သူပြီးသွားတယ်……။
သိမ်ကြီးဈေးနားမှာ ထမင်းကြော်စားပြီး..ဟိုတယ်ကို ပြန်ရောက်တော့………… ၁ နာရီခွဲတော့မယ်………..။
တကယ့်ချစ်သူတွေလိုဘဲ………………… ဟိုတယ်ရောက်တော့ ရေခဲသတ္တာထဲက ဘီယာထုတ်သောက်ပြီး………
စကားပြောလိုက်……….ဆက်ဆွဲလိုက်နဲ့ ……… လေးချီ လုပ်ဖြစ်တယ်……..
လုပ်တဲ့ အချိန်တိုင်း ဆွဲစုပ်ထားတဲ့ သူ့အဖုတ်လေးထည်က ပြန်တောင် မထုတ်ချင်ဘူးဗျာ……….. စိမ်လို့လည်း ကောင်းတယ်
တချို့ အဖုတ်တွေဆို စိမ်လို့ မကေငာ်းဘူး ပူတယ်………။
မနက်လင်းတော့လည်း လင်မယား ကျနေတာဘဲ…….တစ်ယောာက်နဲ့ တစ်ယောက် အနမ်းတွေနဲ့ နိုးထပြီး……
သူ့ကို တချီလောက် ချစ်ပြလိုက်သေးတယ်……….ပြီးတော့မှ……… break fast တူတူ သွားစား…..
ပြီးတော့ သူနဲ့ အတူ ဘုရားသွားဖူးလိုက်သေးတယ်…………..။
ကျနော့်ဘဝမှာ ထူးဆန်းတာက မိန်းကလေး နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို တပြိုင်တည်း ရတာများတယ်……….
အပြန်ကြတော့ …….city mart ခဏဝင်ပြီး ဝယ်စရာ ရှိတာ ဝယ်ပြီး…………. အိမ်ကို သူ့ကိုပါ ခေါ်လာခဲ့တယ်..။
နေ့လည်စာ က သူက လက်စွမ်းပြချင်တယ်ဆိုလို့ ……….. သူ့ကို ချက်ခိုင်းလိုက်တယ်…..။
နောက်တခု ပြောရအုံးမယ်…………….ကျနော့် ချစ်သူတွေကို ကျနော်က ကိုယ်တိုင် အတွင်းခံ စိတ်ကြိုက် ဝယ်ပေးလေ့ရှိတယ်.ဗျ..
ညနေကျရင်တော့ MK သွားပြီး သူ့အတွက် ……. တခုခု ဝယ်ပေးအုံးမှဘဲ ဆိုပြီး…… စိတ်ကူးထားတာ….
တခါတလေတော့လည်း အဲဒီဘဝလေးကို ပြန်လွမ်းသေးတယ်….တယောက်တည်း ဆိုတော့ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်…….
ချုပ်ချယ်မဲ့သူလည်း မရှိ… ရည်းစားဆိုလည်း စိတ်ကြိုက်ထား……………
ကျနော်စည်းတခုတော့ထားတယ်………………သူမကြည်ဖြူဘဲ ဘယ်မိန်းကလေးမှ အတင်း မလုပ်ယူဘူး…….
သူနေ့လည်စာ ချက်နေတုန်း အပြင်ထွက်…….မနဲ့ ကြူ လိုက်သေးတယ်……
မကလည်း ဖုန်းရလို့ ပျော်နေတာလေ……..သူ့ အလုပ် အသစ်ရတယ်ဆိုတော့ သူ့ မိသားစုတွေပါ ပျော်နေကြတာ……..။
မရဲ့ညီမလေးကလည်း တကယ့် အငုံးလေးဗျ……စားချင်စရာလေး………သူကပါ ဘေးက လှမ်းဝင်ပြောနေတာ တွေ့တယ်
သူ့အမေကလည်း ထမင်း ဖိတ်ကျွေးချင်လို့တဲ့………….။
တနလ်ာနေ့ ရုံးကို လာခဲ့ဖို့ ပြောပြီး……… မနဲ့ စကားဖြတ်လိုက်တယ်…….။။
ချစ်သူ ချစ်ကျွေးတဲ့ နေ့လည်စာ စားပြီးတော့…………………………….
တီဗွီလေးကြည့်လိုက်……… သူ့အဖုတ်လေးနိုက်လိုက်…………. နိုလေးချေပေးလိုက်နဲ့…….
တကယ်ပြောတာ………ချစ်သူနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အောကားကြည့်ရတာ အရမ်းကောင်းတယ်……
သူ့တို့ဆီက ပညာတွေ အများကြီးရခဲ့လို့ ကျနော့်ဘဝမှာ မိန်းကလေးတွေဆီက အချစ်ကို ရခဲ့တာလေ..
ချစ်လေး…………ဗွီဒီယိုထဲက အတိုင်း စမ်းကြည့်ရအောင် ဆိုတော့ သူက အလိုက်သင့်လေး ကုန်ပေးတယ်….
ဆိုဖာပေါ်မှာ မှောထားတဲ့ သူ့တင်လေးတွေကို ကိုင်ပြီး နောက်ကနေ ဂျာပေးလိုက်တယ်………….
ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အဖုတ်လေးထဲ လီးထည့်ပြီး အားရပါးရ စောင့်ပေးလိုက်တယ်……..သူက သူ့ကြမ်းမှ ကြိုက်တာ….
သူ့အသားနာလာလေ…….သူက ပိုပြီး ဖီးလာလေဘဲ…………. အဲဒါဟာ စိတ်ရောဂါ တမျိုးဆိုတာ နောက်ပိုင်း စာတွေ ဖတ်မှ သိရတယ်.။
အဲဒီလို စော်မျိုးက သူ့ကို ယုယပြီး နုနုရွရွ ချစ်ပြတဲ့ ဘဲတွေ ဆို အသေမုန်းသွားတယ်…။
ကျနော်လည်း သူ့တင်ပါးကို ရိုက်လိုက်……….လိုးလိုက်…..
ကောင်းလည်းကောင်း…………..နို့ကို ဆွဲလိုက် လိုးလိုက်နဲ့…………
ခေါင်းလေးကို လှမ်းကိုင်တော့………… ဆံပင်ပါ ဆွဲပြီးလုပ်တဲ့.ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး…………..
ဒါနဲ့ လက်တဖက်က ဆံပင်ဆွဲပြီးတဖက်က ဖင်ကြီး ကိုင်ပြီး စောင့်တာ……. အသားချင်းရိုက်သံက အရမ်းမိုက်တယ်…။
ကိုလည်း သူ့ကောပေးနေတာကို ကြည့်ပြီး ပိုပိုပြီး ဖီးလာတယ်……..။
ဒါနဲ့ လက်တဖက်ကို တံတွေးဆွတ်ပေးပြီး ဖင်ခေါင်းလေးပါ ချဲ့ပေးတော့…………………………အို
ကောင်းလွန်းလို့တဲ့………. မြန်မြန် လုပ်ပါ ဆိုတာ ချည်းဘဲ………..
ဒါနဲ့ ဆယ်မိနစ်လောက် ကြတော့ ပြီးသွားတယ်……သူနဲ့ ပြီးတိုင်း ကျနော် ချက်ခြင်း ဆွဲမထုတ်ဘူး……..
ခဏနေတော့ မဆီက ဖုန်းလာတယ်…….ညနေလာခေါ်ပါလားတဲ့
အင်း…….လာမယ်ပြောပြီး ဖုန်း အမြန် ဖြတ်လိုက်ရတယ်.ချစ်လေး သိသွားမှာ စိုးလို့……
ကျနော်က ချစ်လေးကို ……..
ချစ်လေးကိုတော့ ကိုကို မခိုင်းရက်ဘူးကွာ………….. သင်တန်းထက်တပ်လိုက်……ကိုကို ထားပေးမယ်..
ချစ်လေး အလုပ် မလုပ်နဲ့အုံးဆိုတော့ သူကလည်း အိုကေတဲ့……………….. ။
သူ့ကို အဲဒီအချိန်က နံမည်ကြီး management လို ဖြစ်နေတဲ့ ABE advance diploma တက်ခိုင်းလိုက်တယ်.။
အဲဒီနောက်ပိုင်း သူနဲ့ ကျနော် တစ်ပါတ်ကို နှစ်ရက်လောက်တော့ လုပ်ဖြစ်ကြတယ်……..။
ကျနော်က ကျနော်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းကို ပိုပြီး အောင်မြင်စေချင်တယ်………ဒါကြောင့် သူတို့ လိုအပ်တာ မှန်သမျှ ထောက်ပံ့ပေးချင်တယ်ဗျာ…. ကိုယ်တတ်နိုင်တာ ဆို သူ့တို့ကို လုပ်ပေးလိုက်တယ်……….။
ချစ်လေး ဝင်ရှုပ်သွားတာနဲ့ မမနဲ့ ဇတ်လမ်း နည်းနည်း ပြတ်သွားတယ်……………….။
မမ ဖုန်းခေါ်ထားလို့ ညနေ ပြေးတော့မယ် ဆိုတော့ သိတဲ့ အတိုင်း ကားမမောင်းတတ်တဲ့ ကျနော်က ကားကြီးကို ထားပြီး တက္ကစီနဲ့ ပြေးရတာပေါ့……..
သူတို့ လမ်းထိပ်ရောက်တော့………..သူ့ကို ဖုန်းဆက်ရသေးတယ်………..ထုံးစံအတိုင်း လမ်းတွေမှာ လမ်း ဆိုင်းဘုတ်က ရှိတာ မဟုတ်ဘူး……
အိမ်နေရင်း ဝတ်စုံလေးနဲ့တောင် မက ထင်းနေတာဘဲ….ကမန်းကတန်း ထလာတာာ ဖြစ်မယ်.
မ…..က သူ့အိမ်ကို ခေါ်သွားပြီး မိတ်ဆက်ပေးတယ်…….သူ့အလုပ်က ဆရာပေါ့…..
သူ့အမေနဲ့ အဖွားက……အံ့သြလို့…………မရဲ့ ဆရာဆိုတော့ အဖိုးကြီးလို့ ထင်နေတာတဲ့…….
သူ့အမေနဲ့ အဖွားကို စကားတွေ အများကြီးပြောဖြစ်ခဲ့တယ်.အများစုကတော့ သူတို့ ပြောတာပါ….
မ ရဲ့ အဖေ သေပြီး နောက်ပိုင်း မ ကိုဘဲ အားကိုးနေရတယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စရယ်
ကုန်ကျစရိတ်က ကြီးလာလို့………… စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းတယ် ဆိုတာ ..
ဒါနဲ့ ကျနော်ကလည်း မ အနေနဲ့ အခုဆို လစာ ငါးရာကျော်လောက်ဆိုတော့
ငါးသိန်း နီးပါလောက် ရမှာပါ…….. အခြား အပိုတွေ ဘာတွေနဲ့ ဆို ခြောက်သိန်းလောက်တော့ ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့
ကျေးဇူးကြီးပါတယ် မောင်ရင်ရယ်တဲ့……………သူတို့ အိမ်မှာ ထမင်းစားဖို့ ခေါ်နေသေးတယ်….။
သူတို့ မိသားစု စားဖို့ ချက်ထားတာလေး ကျနော်စားလိုက်ရင် သူတို့ ကိုယ်တာ လျော့သွားမှာ သိလို့
ဗိုက်မဆာသေးဘူးဆိုပြီး အတင်းငြင်းခဲ့ရတယ်………..ကျနော့်ဘဝက ငယ်ငယ်က အရမ်း ဆင်းရဲတယ် ဆိုတာ သူတို့ကိုတော့ မပြောပြခဲ့ဘူး…………..။
်မကို ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ ……..မက …….
မောင်…….ဒီနေ့………… မ ကို မနမ်းရသေးဘူးနော်…….လူလည်း မလစ်ဘူး
မကလည်းကွာ………. ဆိုင်မှာဆို မလွတ်လပ်ဘူး……..ဟိုတယ် ခဏသွားမယ်လေ……….ဆိုတော့
သဘောဘဲ လို့ ဆိုတာနဲ့ ကားဆရာကို အနီးဆုံး ဟိုတယ်ကို ပို့ခိုင်းရတယ်…..။
ဟိုရောက်တောက တဆက်ရှင် ယူပြီး.ကျနော်က ဘီယာသောက်..မက အအေးသောက်
စကားပြောလိုက်……….. နဲ့ နည်းနည်း အရှိရလာတော့မှ……..မကို နူးပြီး……..
တချီလော်က ဆွဲလိုက်သေးတယ်……….နေ့လည်က လုပ်ထားလို့လား မသိဘူး….တော်တော် ကြာတယ်ဗျ
မရဲ့ အသံဆို….အပြင်က သေချာပေါက် ကြားလောက်တယ်………….။
မကို လည်း ချစ်တယ်…..ချစ်လေးကိုလည်း ချစ်တယ်………..မ ညီမလေးလည်း ချစ်မိနေမလား မသိဘူး….
အဲဒီကောင်မလေးကလည်း မျက်လုံး အရမ်း ကစားတယ်……….။
ည ၈ နာရီလောက် ကျတော့ အပြင်ထွက် တခုခု စားပြီး မကို လမ်းထိပ်အထိ ပြန်လိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်……..
အိမ်အပြန်လမ်းကြမှ ချစ်လေးကို သတိရတော့ ဖုန်းထဲမှာ သူ့ miss call တွေ အများကြီးဘဲ……
sms လည်း ပို့ထားသေးတယ်……………… ဒီလောက်ခေါါ်နေတာတောင် ဖုန်းမကိုင်ဘူးနော်တဲ့
ဒီလိုပါဘဲ………..လိုချင်တာ ရတော့ …. ဆိုတော့ သူ့ကို မနည်းပြန်ချော့ရသေးတယ်…..။
လုပ်ငန်းခွင် ဝင်တော့မှ မရဲ့ အစွမ်းအစကို ပိုသိလာရတယ်…………..
သူက ရာထူးကြီးကြီး မလုပ်ဘူးပေမယ့် အလုပ်လုပ်တာတော့ အတော်လေး စေ့စပ်တယ်……..
အတွင်းရေးမှူးး သင်တန်းလည်း တက်ခိုင်း……အင်္ဂလိပ်စာလည်း တက်ခိုင်း..
သူလည်း အရမ်း ပင်ပန်းပါတယ်…………။
လူမိုက် ကံကော်ငးတယ် ပြောရမလား မသိဘူးဗျာ………..နေပြည်တော်မှာ တင်ဒါ တင်တာ ကျနော့် တို့ ကုမ္ပဏီက အလုပ်ကြီး တခုရတယ်..။
ထုံးစံ အတိုင်း ခိုင်းလို့ ကောင်းတဲ့ ခိုင်းနွားတွေဆို………အသဲအသန်ချီးမွမ်းကြတာပေါ့……
အလုပ်လုပ်တာ ခြောက်လတေငာ် မပြည့်သေးဘူး……….. projects ကြီး ရတယ် ဆိုပြီး ကျနော့်ဆီ အီးမေးတွေ ပို့ပြီး ချီးမွမ်းကြတယ်…။
ကိုယ်လိုချင်တာက လစာ ဒီထက် ပိုလိုချင်တာလေ……………..
စပွန်ဆာက နှစ်ယောက်တောင် ပေးထားရသလို ဖြစ်နေတာ……….. အမေ အတွက်လည်း ရှိသေးတယ်…..။
နောက် တပါတ်လောက် ကြာတော့ အလုပ်ကိစ္စ စာချုပ်ချုပ်ဖို့ ဟိုက regional director ဘုတ် အဖွဲ့လာကြမယ်ဆိုတော့.
ပို အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့……နေပြည်သွားဖို့ ကားဌားရ..ဟိုမှာ ဟိုတယ် စီစဉ်ရ
သူတို့ကို Park royal မှာဘဲ ………….ထား လိုက်တယ်…..။
လေဆိပ်သွားကြိုပြီး အပြန်လမ်းမှာဘဲ မင်း အလုပ်လုပ်တာ တော်လို့ ဒို့အဖွဲ့က မင်းကို လစာ ၁၀၀၀ တိုးပေးလိုက်ပြီ ဆိုတော့
သူတို့ကို ထားခဲ့ပြီး ပြန်အလာ ကားပေါ်မှာ မ က…. ကျနော့်ကို ကြည့်ပြီး အားကျလို့တဲ့
စိတ်ကောင်းထားလို့ ကံကောင်းတာ ဆိုပြီး လူကြီးလေသံနဲ့ ပြောသေး…..
မ………. အိမ်လိုကခဲ့ကွာ…..တူတူ မအိပ်ရတာ ကြာပြီ
အိမ်ကို နယ်ခရီးသွားရမယ်လို့ လှမ်းပြောလိုက် ဆိုတော့…………….သူက မညာချင်ဘူးတဲ့
ဒါပေမယ့် သူလည်း တူတူ နေချင်တော့ …….. Yes ဆိုတော့ . city mart မှာ သူ့ကို ထားခဲ့ပြီး driver ကို ကိုယ်က လိုက်ပို့ခိုင်း
ပြီးတော့ city mart ပြန်သွား…….အလုပ်ကို ရှုပ်နေတာဘဲ……….။
ညဘက်ရောက်တော့……… ထုံးစံ အတိုင်းပေါ့ဗျာ…………… ဒီညက ပိုမိုက်တယ်ဗျာ…………ကျနော် စမ်းချင်တဲ့ ဆေးကို စမ်းကြည့်တာလေ…….။
ယောက်ျလေး သဘာဝ video တွေ အကြည့်များလို့လား မသိဘူး………ဗွီဒီယိုထဲက ကောင်တွေ ဆေးထိုးထားတဲ့ ပုံစံတွေ မြင်ရင်
ကိုယ့်ဟာကိုယ် သေးနေသလို ခံစားရလို့…………… အမြဲတမ်း ပိုပို ကြီးချင်နေတာ….
နိုင်ငံခြားက သူငယ်ချင်းပြန်လာလို့ သူဝယ်လာတဲ့ ဆေးလေး သောက်………. လူဆေးလေးနဲ့ စမ်းကြည့်ချင်နေတာ………။
သူတို့ဆီမှာက တရားဝင် ရောင်းတာလေ…… အကျိုး အာနိသင်ကော .ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးကော သေချာ ရှင်းပြပြီးရောင်းတာ.
အခု city mart မှာ ရောင်းနေတဲ့ X Man ဆိုတာ ဈေးကလည်း ကြီး effect ကလည်း ဘာမှ ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး……
နိုင်ငံခြား website ထဲ ဝင်ရှာကြည့်လိုက်……… ။ top 100 ဆေးထဲတောင် ပါတာ မဟုတ်ဘူး……… ၂ ဘူးကို ၉.၉၀ USD ဘဲ ရှိတာ
ဒီမှာက သုံးသောင်းခွဲကျော်နဲ့ ရောင်းတယ်……။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့က ပွေဖော် ပွေဖက်ဆိုတော့ အလိုက်သိတယ်လေ…….။
အဲဒီနေ့က မကို ဒီဆေး အစွမ်းနဲ့ ချစ်ပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးပြီး
သူ့ကို city mart ဝင်ခေါ်……ဟိုရောက်တော့ Vodka နဲ့ အချိုရည်လေးတွေ ဝယ်ပြီး ကောက်တေး စပ်သောက်မယ် စိတ်ကူးထားတ.
သောက်ဆေးကတော့ ကြိုပြီး သောက်ထားလိုက်တယ်…..လူးဆေးကိုလည်း နာရီဝက်လောက် ကြို လူးထားတယ်..။
သောက်ဆေးကတော့ ချက်ခြင်း အစွမ်း မပြဘူး………လူဆေးကတော့ စွမ်းတယ်ဗျာ……….
လူထားတာ ငါးမိနစ်ဘဲရှိသေးတယ်………ပူရှိန်းရှိန်းနဲ့ အစွမ်းပြလာပြီ……တင်းပြီးမာလာတော့ ပိုရှည်လာတယ် ထင်ရတာပေါ့….။
မအတွက် ကောက်တေး ဖျော်ပေးရင်း………… မီးဖိုးချောင်ထဲ တချီလောာက် ဆွဲမယ် စိတ်ကူးထားတာ………
အိမ်နေရင်းမို့ သဘက်လေး ပတ်ထားတဲ့ သူ့ကို နောက် သိုင်းဖက်ပြီး………….. နို့လေးတွေ ချေ..
ဆံပင်လေးကို နမ်းလိုက်………နားရွက်လေး စုပ်လိုက်……………..လည်းပင်းလေးကို ကစ်ဆင်ဆွဲပေးလိုက်နဲ့………..
သူက ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ပေးတယ်……….
ကျနော်လည်း လီးကို ဖင်နှစ်လုံးကြားထဲ တည့်ထားပြီး ဆက်နမ်းတယ်………… ကောင်းတယ်ဗျ
ကားပေါ်မှာ ထောက်ရသလိုမျိုးဘဲ………………. ။
သူလည်း အရှိန်ရ ကိုယ်လည်း အရှိန်ရရော….သူက ကျနော့်ကောင်လေးကို မှုတ်ပေးမလို့…….
သူ့ကို ကုန်းခိုင်းပြီး နောက်ကဘဲ ဆွဲထည့်လိုက်တယ်………….။
ဆေးကောင်းရင် လီးက မာပြီး ပိုသန်လာတယ်…………… ။
သူကတောင် ပြောသေးတယ်….မောာင်လေးဆေးက ကြီးဆေးလားတဲ့…ဟိုနေ့ထက် ပိုကြီးနေသလိုဘဲတဲ့
သူလည်း မလုပ်ရတာကြာလို့ ထင်တယ်…….စကားတောင် သိပ်မပြောနိုင်ဘူး………
လီးဝင်ပြီး ဆောင့်လိုက်တာနဲ့….အောက်လိုက်တာ………… ဗွီဒီယိုထဲက အတိုင်းဘဲ…….။
တကယ် လိုးလို့ကောင်းတယ်ဗျာ……….. မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ လိုးရတာ……. အရမ်း အရသာရှိတယ်…….။
တော်တော်နဲ့ မပြီးနိုင်ဘူး……….. ဆေးကောင်းဝါးကောင်းဆိုတာ အဲဓီလို အစွမ်းပြတယ်……။
သူ နှစ်ချီပြီြး့ပီတဲ့………ကိုယ်က ဆွဲလို့ကောင်းတုန်း…….
မောင်လေး မြန်မြန် ပြီးတော့……မ မခံနိုင်တော့ဘူး ဆိုမှာ………..
သူ့ကို ပြန်ဂျာပေးပြီး………………. ဖီးလာအောင်ပြန်သွင်း………………ပြီးမှ သူ့ကို အပေါ်က တက်ဆောင့်ခိုင်းတယ်…….
သူအပေါ်က တက်ဆောင့်တဲ့ အချိန် နို့လေးတွေ ချေပေးလိုက်….ဖင်ကြီးကို ညှစ်လိုက်နဲ့……….. ငါးမိနစ်လောက်ကြတော့.
နှစ်ယောက်လုံး တူတူ ပြီးသွားတယ်…………။
ကျနော့် သုတ်ရည်တွေ သူ့အဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်တဲ့ အရှိ အတော်ပြင်းလို့နဲ့ တူတယ်…….
သူ့အဖုတ်လေးက ပွစိပွစိနဲ့ ဆွဲဆွဲညှစ်သလို ခံစားရတယ်…………။
ပြီးတာတောင် ကိုယ့်ကောင်က မကျသေးဘူး………………….။
သူက ကျနာ့် လီးကြီးကို ဆွဲကိုင်ပြီး……လူဆိုးတဲ့ ……ခုထိ မငြိမ်သေးဘူး……… ဆိုဘဲ….
သူနဲ့ ကျနော် ကောက်တေးလေး သောက်လိုက်…အမြီးလေး စားလိုက်
အောကားလေး တူတူ ကြည့်ရတာ သိပ်အရသာရှိပေါ့………
နှစ်ယောက်သား သဘက်လေးဘဲ ပတ်ထားတာ ဆိုတော့
ကိုယ့်ဟာကို သူက စပြီး လာမှုတ်ပေးတယ်………….။
ဆေးကောင်းတာ သုံးတဲ့ အခါ…….. အကြောတွေကပိုသန်လာပြီး……………. ဒစ်ကြီးက ပိုကြီးလာသလိုဘဲ
အဲဒီ ထောင်လာတဲ့ အကြောတွေက စော် အမြှေးပါးလေးတွေကို ဆွဲဆွဲ ပွတ်သွားလို့ သူတို့လည်း ပိုပြီး ဖီးလ်ရှိတယ်လေ……..။
သူ့နှာခေါင်းလေးတွေ ရဲတွတ်……မျက်လုံးလေး မှိတ်ပြီး…. ဆံပင်လေးကို လက်တဖက်က လှန်..ကျနော့်ဟာကို တဖက်က ကိုင်ပြီး
အားရပါးရ စုပ်ပေးနေတဲ့ မကို ပိုချစ်လာတယ်ဗျာ…………။
အဲဒီညက မှတ်မှတ်ရရ ကျနော် သူ့ကို ၇ ခါ ဆွဲဖြစ်လိုက်တယ်……..
မနက်လင်းခါနီးမှာ နှစ်ယောက်သား အိပ်ပျော်သွားတာ…….. ကျနော်ဆို အိပ်ယာကလည်း နိူးရော
ဒူးတွေ တေင် ချေင်တယ်ဗျာ…………….ဒါကြောင့် ကိုယ်ဒူးကိုယ်ချွန်သူများဆိုပြီးပေါ်လာတာ……….။
တခု ပြောပြအုံးမယ်…………….. မိန်းကလေးတွေ ပီးသွားတဲ့ အခါ သူ့တို့ မျက်နှာလေးတွေက ချက်ခြင်း ချောင်ကြသွားတာ
ကိုယ့်စော် ပြီးလား မပြီးလား သိချင်ရင်………… မချခင်နဲ့ ချပြီး သူ့မျက်နှာလေး ယှဉ်ကြည့်……….။
၇ ခါမှ ဆယ်ခါလောက် ပြီးထားတဲ့ မရဲ့ မျက်နှာလေးဆို ချောင်ကြနေတာလေ……..။
ထတော့.ညနေ ဒင်နာ သွားရအုံးမယ်ဆိုပြီး နှစ်ယေက်သား နေ့လည်စာ သွားစား…………..
ပြီးတော့ အိမ်မှာ နားပြီး…………. လေးနာရီလောက်ကျတော့ driver ကို ဖုန်းခေါ်………. parkroyal ကို ပြန်ပြေးရတယ်..။
BOD အဖွဲ့က လူတွေကို ဒေါ်စောရီမှ မြန်မာစာ လိုက်ကျွေး တော်ကီဖုတ်ပြီး မနက်ဖြန် နေပြည်တော် ခရီး အတွက် ရှင်းပြ……..။
အပြန်ကျ သူတို့ကို park royal ပြန်ပို့ပေးပြီး…………… မနဲ့ စေျးထွက်ဝယ်………
MK မှာ မ အတွက် one set လေးတွေ လိုက်ဝယ်ပေးတယ်……….
မိန်းကလေးတွေဟာ တကယ်ချစ်လာရင် ကျနော်တို့ထက် ပိုသတ္တိရှိတယ်….။
အဝတ်လဲခန်း တံခါးလေး ဖွင့်ပြီး မောင်……လှလားတဲ့
သုံးခါလောက် အဝလိုးပြီးမှ ကျနော့်ကို မောင်လို့ သူက စခေါ်တယ်….ဒါတာင် ပျော်နေလို့ သတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီး ခေါ်တာ ဖြစ်မယ်.။
သူတံခါးဖွင့်လိုက်တော့………. အပြင်ကလူတွေ လှမ်းမြင်နိုင်တယ်လေ……………ဒါပေမယ့် ဂရုမစိုက်ဘူးဗျာ…..
လှတယ်မရေ…….. ပြန်ပိတ်တော်ကြာ လူမြင်ကုန်အုံးမယ်ဆိုပြီး မနည်းပြန်ပိတ်ခိုင်းရတယ်…။
အပြန်ကျတော့ …..သူ့ကို ပြန်ပို့ပေးပြီး အိနြရရ ပြန်လာရတယ်.။ ကိုယ်လည်း တကယ် မစွမ်းနိုင်တော့ဘူး
ဆေးကောင်းချက်က ………….. အောက်က ကောင်က အခုထိ မာတောင်နေတုန်းဘဲ……………..။
ချစ်လေးကို သတိရလို့ တော်ကီပွားလိုက်သေးတယ်………သူလည်း သင်တန်းတွေတက်နေတာရယ်……ရည်းစား အသစ်ရယ်နဲ့ ရှု့ပ်နေမှာ…..လို့ တွေးမိရင်း……….. ပြုံးမိသွားသေးတယ်…….။
မ က အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ…..ပိုပို သိလာရတာ လူသစ်တွေ ခန့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာဘဲ……….
ကျနော်တို့ ရုံးက projects ရပြီဆိုတေ့ လူတွေ အများကြီး ခေါ်ရမှာလေ……….
နေပြည်တော်က ပြန်လာကတည်းက အဲဒီကိစ္စ စီစဉ်နေရတာ……အရင်က တင်ထားတဲ့ CV ထဲက လူတွေကို အင်တာဗျူး ပြန်ခေါ်မလို့ လုပ်နေတုန်း……….သူက လှမ်းနောက်တယ်
မောင်ရေ……………. မလှတာဆို မ ဖယ်ထားလိုက်ပြိနော်တဲ့…………။
သူဘဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စားရေးမလေးတွေ…….. ခေါ်ပေးတယ်…….
အင်ဂျင်နီယာမ တွေ အများစုကတော့ သိပ်မလြှကြဘူး……..တစ်ယောက်ဘဲ…….တော်တော်လှတယ်……
အဲဒီတော်တော်လှတဲ့ ကောင်မလေးကတော့ ကျနော် ချက်ခြင်း ခန့်လိုက်တယ်……..အဲဒီလို ဘူးကျတာ………
ကျနော့်က သူ့ကို ခန့်တယ်ဆိုတာ ကွန်ဖန်းပေးတော့……….. မျက်နှာလေးမဲ့ပြီး…..
ဒီကောင်မလေးကို ကျတော့ ချက်ခြင်း ခန့်တယ်…..မကိုကျတော့ နှစ်ခါတောင် ဗျူးတယ်တဲ့…………ဆေးလိပ်လေးကိုင်ပြီး ကျနော့် နှာခေါင်းနား လာကပ်တယ်………။
ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ မ အမူအရာမြင်တော့…………. ညီလေးက မနေနိုင်ဘူး……
မ…….မောင့်ကိုစုပ်ပေးပါလား.နောက်တစ်ယောက် မဝင်ခင်…………မြန်မြန်လေး ဆိုတော့
လူဆိုးတဲ့……………………. ပြောသာ ပြောတာ….ပါးစပ်က ဒစ်ကို ငုံထားပြီးသား………..အဲဒီလောက် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အတွင်းရေးမှးမမ
မရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အပြုအစု…………. အောက်မှ ကျနော့် သုတ်ရည်တွေ မရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို တဝကြီး ပန်းထုတ်လိုက်တယ်…..
လုပ်ချင်တာ လုပ်ပြီးမှ အားနာသွားတယ်………….အလုပ်ချိန်ကြီးထဲမှာ……….
မရဲ့ မျက်နှာလေးကို ကြည့်တော့……… မူမပျက်လို့ တော်သေးတယ်………
လရည်လေးတွေကို လျှာနဲ့ ဝိုက်သိမ်းပြီး …ပါးစပ်လေးကို တစ်ရူးလေးနဲ့ ကာပြီး မ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားပြီး သွားဆေးရသေးတယ်……။
ခဏနေတော့ သူပြန်ဝင်လာမှ အင်တာဗျူး ဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်………..။
ညနေ သုံးနာရီကျော်တော့ ဒီနေ့ အတွက် သိမ်းပြီး………….. လိုအပ်တာလေးတွေ ဆက်လုပ်……….
မဆိုးဘူး…… အဲဒီနေ့က လူတော် ကောင်မလေးတွေ ၅ ယောက်လောက်နဲ့ အင်ဂျင်နီယာ သုံးယောက်လောက်ကို ဇကာတင် ရွေးခဲ့တယ်.။
ညနေကြတော့ ထုံးစံ အတိုင်း သူ့ကို ပြန်ပို့ပေးပြီး……………ကိုယ်က ပြန်လာ………..။
အလုပ်များနေတော့…….. သူနဲ့ ကျနော်တောင် သိပ်မလုပ်ဖြစ်ကြဘူး……..။
ရုံးမှာလည်း လူများလာပြီ ဆိုတော့ နည်းနည်း ဆင်ခြင်ရတယ်………။
ဒါပေမယ့် မက ကျနော့် အတွက် အများကြီး စီစဉ်ထားတယ် ဆိုတာ သိရတဲ့ နေ့……..မ ကို ပိုချစ်မိလာတာပေါ့ဗျာ…….။
ထုံးစံ အတိုင်း သောကြာနေ့ ဆိုတော့………… လူတွေက အလုပ်လုပ်ရတာ သိပ်စိတ်မပါကြသလို…….
နားရက် အတွက် အစီအစဉ်တွေ ဆွဲနေကြတာပေါ……..
တနင်္လာကလည်း ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ သုံးရက် ပိတ်တယ်လေ……..။
မက ကျနော့်ကို လာပြောတယ်……….မောင်ရေ
ဒီအပါတ်……. ချောင်းသာ သွားရအောင်လေတဲ့……..
သူ့မိသားစုတွေကို ချောင်းသာကို လိုက်ပို့ပေးချင်လို့တဲ့……………။
ကျနော်ကလည်း သိတဲ့ အတိုင်း မိသားစုနဲ့ ဆို မလွတ်လပ်မှာ စိုးလို့ …….မလိုက်တော့ဘူးဆိုတော့
ရုံးက အလန်းလေး နှစ်ယောက်လည်း ပါမှာတဲ့…………… မက အကုန် စီစဉ်ပြီးသား
သူတို့ အတွက် ဘန်ဂလို တစ်လုံး……..ကျနာ့် နဲ့ ရုံးက ကောင်မလေး နှစ်ယောက် အတွက် ဘန်ဂလို တစ်လုံး…….
သုံးရက်ပိတ်လည်း ဖြစ်…….ခရီးသွားရာသီလည်း ဖြစ်တော့………….. အခန်းတွေ ကျပ်တာကို အကြောင်းပြပြီး…
သူက သေချာ စီစဉ်ပေးထားတာ………။
ဒီလို နဲ့ ဒါဆိုလည်း မ သဘောဘဲ……….မောင်တော့ လိုက်ခဲ့မယ်…….
တခန်းရရင် ထပ်ယူပေးပါအုံး……….မနဲ့ တူတူ ကဲရအောင်လေဆိုတော့……ဗိုက်ခေါက်လိမ်ဆွဲတယ်……..
အဲဒီနှစ်ယောက်ကို စားနေတဲ့ အချိန်………… မ ကို သတိရလိမ့်မယ် မထင်ဘူးတဲ့..။
ချောင်းသာကိုတော့ ကားစီးလုံး ဌားလိုက်တယ်………..ဒါမှ သွားချင်တဲ့ နေရာ သွားလို့ရမှာလေ.
မနက် အစောကြီး ထသွားတာ ဆိုတော့…………. ဟိုရောက်တော့ ….. ဆယ်တစ်ဘဲ ရှိသေးတယ်…..
အခန်း check in ဝင်ပြီး………………. မက အခန်းကို လိုက်ပို့ပေးသေးတယ်…။
ပြီးတော့ ဟို နှစ်ယောက်ကိုလည်း….ဒို့မန်နေဂျာကြီးကလည်း သောက်တတ်တယ်နော်…….
နင်တို့ ဝိုင်းသောက်ပေးလိုက်အုံး….သူ့ကိုပျော်အောင်ထားလိုက်…….ဒါမှ လစာတိုးမှာ ဆိုပြီး လှမ်းနောက်လိုက်ပြီး
ခဏနေမှ အစ်မ ပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့……..။
ကျန်ာလည်း ကဲညီမတို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အဝတ်အစား လဲချင်လဲကြ……………. အစ်ကိုလည်း စားစရာလေးစီစဉ်လိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီး
လမ်းမဘက်ထွက်……….. ပင်လယ်စာ အစုံမှာ………..ဘီယာ ဝယ်ပြီး
အခန်းထဲ ပြန်လာတော့ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်က အဝတ်အစားလဲပြီးပြီး
ဂါဝန်လေးတွေနဲ့………………. တစ်ယောက်က ဘောင်းဘီတောင် မဝတ်ထားဘူး………..။
ကျန်ာကြို့က်တဲ့ ကောင်မလေးက ခေတ်ဆန်တယ်.ရဲတင်းတယ်……….။
ကဲလာ.စားကြ……….. တစ်ယောက်က မ ကို သွားခေါ်ဆိုတော့ ….တစ်ယောက်က အလိုက် တသိ ထသွားတုန်း…..
ကဲညီမက အစားအသောက်ပြင်ကွာ ဆိုတော့ ….ထည့်စရာ ပန်းကန်မရှိ
နေရောင်ခြည်အောက်မှာ ညည်းက ပိုလှနေသလိုဘဲနော်………….ဆိုတော့ မသိသေးဘူ
ပိုပြီး ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရတော့ ပေါ့ ဆိုမှာ……….
လူဆိုးကြီး ဆိုပြီး.လူကို လိုက်ရိုက်တယ်………….
ဘောင်းဘီ ဝတ်လိုက်အုံးမယ်ဆိုတောာ့……..ဝတ်မနေပါနဲ့ကွာ………….ပြီးရင်လည်း ချွတ်ရအုံးမှာ
ပူက ပူနဲ့……ဒီတိုင်းလေးဘဲ လှပါတယ်ဆိုတော့…………. သူမျက်နှာလေးက ရှက်သွေးဖြာပြီး…. ချစ်စရာလေးဗျ
သူက သက်မွန်မြင့်နဲ့ အတော်လေးကို ဆင်တာ……….. ။
အစ်ကိုလည်း လဲလိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီး……… ဘောင်းဘီရှည် ချွတ်ချ…….. အတွင်းခံပါ ချွတ်ပြီး…..boxer လေး ဝတ်လိုက်တယ်…
ဒုတ်က ထောင်နေတော့ တန်းလန်းကြီးပေါ့ဗျာ………. အပြင်ပြန်ထွက်တော့ သူက စိုက်ကြည့်ပြီး ရီနေတယ်.။
သေချာပါတယ်………သူနဲ့ ကျနော် ဒီမှာ ဇတ်လမ်း ဖြစ်မယ် ဆိုတာ………. ဟိုတစ်ယောက်ရှေ့တော့ ဟန်ဆောင်နေမှ
နောက်တစ်ယောက်က ရိုးရိုးအအ ပုံစံလေး…………… သူ အရက်မူးမှ ကျွဲခိုးပေါ်မယ်လို့ မထင်ထားမိခင်ကပေါ့……..။
ခဏနေတော့ ပန်းကန်တွေလည်း ရောက်လာ…မတို့လည်း ရောက်လာလို့ ……… သူ့ညီမကို ဟင်းပွဲတွေ ခွဲပေးပြီး.
သူတို့ မိသားစုနဲ့ တူတူ ပြန်စားခိုင်းလိုက်တယ်…………..မရဲ့ ညီမကလည်း ဂါဝန် အပါးလေးနဲ့..
နေရောင်အောင်မှာ ကော့နေတဲ့ တင်လေးကို ငေးလိုက်သေးတယ်……..။
ကဲ မစားခင် အမောပြေလေး……..ဆိုပြီး…….လေးယောက်သား ခွက်ကိုင်…..
ဒီလိုနဲ့ သောက်လိုက် စားလိုက်………….ဟိုကောင်မလေးက တကယ့်အူရိုင်း………..ကျနော့ ကောင်မလေးက အူယှဉ်.
သုံးခွက်လောက် ဝင်ပြီးတော့ ဟိုကောင်မလေးက စကား အတော်များနေပြီ…….လျှာကလည်း လေးလာတဲ့ အသံနဲ့……
ကျနော့်ကိုလည်း ကိုကို ဆိုပြီး ခေါ်နေပြီ……………ခွင်ကတော့ ဝင်ပြီ
ကျနော်တို့ သုံးယောက်ကတော့ ဆက်သောက်နေတုန်း မက
ဟဲကောင်မလေး….နင် မသောက်နဲ့တော့……..မူးပြီး အန်နေအုံးမယ်………ဒို့ဂျာကြီး စိတ်ဆိုးသွားမယ်ဆိုတော့
ရပါတယ် မရယ်……………ဂျာကြီးက သဘောကောင်းပါ………… တယ်
ဆို ပြောလည်း ပြော ခွက်လည်း မော့လိုက်သေးတယ်……။ ထိုင်နေတာကလည်း အောက်စက လွတ်တော့
အတွင်းက ပင်တီ အဖြူးလေးက ပေါ်နေပြီ…..သူ့အဖုတ်က သိပ်မဖောင်းဘူး…………………။
သိပ်မကြာပါဘူး……ဆရာမ ငါးခွက် အယောက် မှောက်သွားတယ်……………အိပ်ချင်တယ်ဆိုပြီး ဝင်သွားတာ ပြန်ထွက်မလာတော့ဘူး
သောက်ရင်း ပုလင်း ကုန်သွားလို့……………မက ထွက်ဝယ်ရင်ကြာနေမယ်..အခန်းထဲက ပုလင်း အရင်ယူလာမယ်ဆိုပြီးသွားယူပေးနေတုန်း
ချစ်လေးနဲ့ ကျနော်ဘဲ ကျန်ခဲ့တာ…..သူ့နံမည်က ……. ယု တဲ့.အပြည့်အစုံတော့ မပြောချင်ဘူး.
ယုလေး…..ဘယ်လိုလည်း…….ရသေးလားဆိုတော့ အိုကေပါတယ်တဲ့ ချစ်စရာ အမူအရာလေးနဲ့……..
ခဏနေတော့ မ ပြန်လာတော့……ယုက အထဲဝင်သွားတုန်း………..မ
ယုက အဆင်ပြေရဲ့လားး……ဆိုတော့…………မ သူ့ကို မေးကြည့်ပြီးပြီသူကလည်း လိင် ကိစ္စ စမ်းချင်နေတာတဲ့
မကို အဲဒီကိစ္စ အမြဲတမ်း ပြောတိုင်း………….. မက ညွှန်းထားလို့ သူက သိပ်စမ်းချင်နေတာတဲ့……..။
မောင်လေးဆို ဒုတ်က အကြီးကြီး ဖြစ်နိုင်တယ် ဘာညာနဲ့ ဟာသတွေ ပြောပြီး စနေကြ ဆိုတော့ သူက သိပ်သိချင်နေတာ
ဒါဆို သုံးယောက် တူတူ လုပ်မလား ဆိုတော့………..
အဲဒီလောာက်ကြီးတော့ မဖြစ်သေးဘူးနဲ့ တူတယ်တဲ့………. ကိုယ့်ဟာကိုယ် အရင် လုပ်ပြီး……မှ
မကလည်းကွာ….မောင်က အရမ်းဖီးလာနေပြီ…………ဒီမှာ ကြည့်ဆိုတော့……
ကိုယ်တော်……… ဝရန်တာကြီးမှာနော်တဲ့.လူတွေလည်း မြင်သွားအုါံ်မယ် ဆိုပြီး
ဒုတ်လေးကို ခပ်ဖွဖွလေးကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးတယ်…………..။
ပြောဖို့ မေ့နေလို့………..မ ဝတ်ထာားတာက ကြိုးတချောင်းနဲ့….အောက်က စကဒ် အတိုလေး……
အောက်ခံ ဘောင်းဘီလည်း မပါဘူး………….. ။ ဒါနဲ့ သူ့ကိုလည်း ပြန်နိုက်ပေးလိုက်တယ်…….။
ဆယ်မိနစ်လောက် နေမှ ယုက ထွက်လာတယ်………….သေချာတယ်………သူလည်း ဘရာချွတ်ခဲ့ပြီ
ယုရေ……….ကြည့်လည်း လုပ်နော်တဲ့……..ဒို့ဂျာကြီး.ဘောင်းဘီလည်း ပေါက်ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့
ယုက …….ဟုတ်ပ…..အစ်ကိုဟာကြီးကလည်း………….. ထောင်နေလိုက်တာ…မနာဘူးလားတဲ့
နာတော့ နာတာပေါ့ဟ…………. ချွတ်ထားလို့မှ မရတာ…..။ ပုဆိုးလည်း မဝတ်ချင်ဘူး ……..
မက……ကဲဟာ ငါတော့……… အိပ်ချင်လာပြီ….မနက်ကလည်း အစောကြီး ထလာရတာ…..
ညနေရေထဲ ဆင်းအုံးမှာ ဆိုတော့………. အားမွေးလိုက်အုံးမယ် ဆိုပြီး ပြန်သွားတယ်……..။
ကဲယုရေ.. ကိုယ်တို့လည်း သိမ်းရအေင် ဆိုပြီး…… အထဲဝင်တော့…………….
ဟိုဆရာမက အထဲမှာ အိပ်တာ ပိုးလိုးပက်လက်………….တက်ပြီးတောင် စော်လိုက်ချင်သေးတယ်.။
ဆရာ……..ဘယ်လိုလည်းတဲ့ ဖီးလ်တွေ စွတ်တက်နေပြီလားဆိုပြီး ယုက စတာနဲ့
ငါက နင်မြင်ကတည်းက ဖြစ်နေတာ……….. ဒီမှာ ကြည့်ပြီး ဆိုပြီါ်
ဘောင်းဘီ ချွတ်ပြလိုက်တယ်………….။သူက ……………..ဟာ အကြီးကြီးဘဲ..
ဗွီဒီယိုတွေထဲက အတိုင်းဘဲုဆို မျက်လုံးလေးပြူး ပြီး.လျှာလေး တစ်လစ်လေးနဲ့………..
ယု……ကိုယ့်ကို ကူညီအုံးကွာ……….ဒါကြီးထနေရင် အိပ်ပျော်မှ မဟုတ်ဘူး…….ဆိုတော့
ဘယ်လို ကူညီရမယ် ဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်တယ်…….
နှစ်ယောက်သား ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ပြီး သူက ကိုယ့်ကို ဂွင်းထုပေးနေတုန်း……..ယုကိုလည်း ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး
သူ့အဖုတ်လေးကို ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးပြီး ဖင်လေးကိ ညှစ်လိုက်နဲ့………. သူစိတ်ပါလာအောင် လုပ်ပေးလိုက်တယ်……။
ပြီးတော့…….ယု………ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးမယ်ကွာ………… ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီး……….
ဂျာပေးလိုက်တယ်…….သူ့ဖင်လေးလေးက ဖွေးပြီး အမွှေးနုလေးတွေနဲ့……………. အတွေ့အကြုံတော့ ရှိပုံရတယ်.
ဘေးနှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက နည်းနည်း တွဲနေပြီ………..
ကျနော့် အကြိုက် အနေအထားရတော့……….ကိုယ်မရတော့ဘူး ယုရယ်လိုးချင်နေပြီ ဆိုပြီ
ဒုတ်ကို တေ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ထည့်ပေးလိုက်တယ်……….။
ဒီလိုနဲ့ သူက ပြန်ဆောင်လိုက် ။ နောက်ကနေ …. နို့လေးတွေကို ဖက်ပြီး ဆွဲတာ………………. doggy style နဲ့……
နှစ်ယောက်သား ကောင်းနေပြီဆိုတော့ သူပြီးအောင်…… အစိလေးကို လှမ်းကလိပေးလိုက်တာ….သိပ်မြကြာဘူး
ခဏလေးနဲ့ ပြီးသွားတယ်………ကိုယ်လည်း မြန်မြန်ပြီးအောင် လုပ်ပြီး………….. နှစ်ယောက် ရေတူတူ ချိုးလိုက်တယ်
ရေချိုးနေတုန်း အသဲယားလာလို့…………. ထပ်ဂျာပေးပြီး…………….
သူ့ကို ချီပြီး အပြင်ထွက်လာတယ်………….. အပြင်ရောက်တာနဲ့ သဘက်လေး နဲ့ သုတ်ပေးပြီး…………….. ခုတင်ပေါ် မှာ ပက်လက်လေး သူ့ကို ပေါင်တွေ ပုခုံးပေါ် စွဲတင်ပြီး…………ထပ်ဆွဲလိုက်သေးတယ်
သူလည်း အောက်ပေးတော့ ကောငာ်းတယ်ဗျာ……လီးဝင်ကောင်းအောင် ပြင်ပေးပြီး……………. အောက်က ပင့်ပင့်ပေးတယ်
ဟိုစော်လေးကတော့ ဟောက်တောင် ဟောက်နေပြီ…………။
ကျနော်လည်း အပြင်မှာ တချီ ထပ်ပြီးအောင် လုပ်ပေးလိုက်ပြီး………မှ
ကဲ ကလေးရေ…အိပ်ကျရအောင် ဆိုပြီး………………. ခုတင်ချင်း ချိန်းလိုက်ရတယ်………
ပင်ပန်းတာလည်း ပါ…….. နှစ်ချီတောင် ဆွဲထားတာဆိုတော့…….. အိပ်ပျော်သွားတယ်…….။
………….. အိပ်ယာက နိုးလာတော့…………. နာရီကောက်ကြည့်လိုက်တာ လေးနာရီကျော်နေပြီ…….
ဘေးကို ကြည့်လိုက်တော့…….တစ်ယောက်မှ မရှိတာနဲ့………… အဝတ်အစားလဲ…..
ရေကူးဘောင်းဘီလေး ဝတ်ပြီး…………. ကမ်းခြေဘက် ထွက်လာခဲ့ပြီး မကို လိုက်ရှာတယ်……..။
မ နဲ့ သူ့မိသားစုက ဓါတ်ပုံရိုက်နေတော့………..ကျနော်လည်း အနားရောက်သွားရော
အတော်ဘဲ………အစ်ကို လာတာနဲ့….ဒီမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးပါအုံးတဲ့……..ဆိုပြီး မရဲ့ ညီမလေးက
ဖုန်းလေး ထိုးပေးလို့………. သူတို့ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးရင်း……………….ငေးလိုက်တယ်
မရဲ့ ညီမလေးက အတော်လေးကို တောင့်တာပါ…….တင်ကားကားလေးကို လုံးဝန်းတဲ့ ဖင်လေးနဲ့ ကွပ်ထားတော့……
တကယ့်ကို အနှစ်ဘဲ…………အနေတော် ရင်နှမွှာကလည်း ဘရာဇီယာကြားက ထိုးဖောက်တော့မယ့် အတိုင်း…..
နေက ကျနေပြီ ဆိုတော့……..ပင်လယ်ဘက် ကျောပေးထားတဲ့ အတွက်…….သူ့အတွင်းခံလေးကို ရေးတေးတေး လှမ်းမြင်ရတော့
ဒီကကောင်က ဒုက္ခပေးပြီလေ…………..ရေကူးဘောင်းဘီအောက်မှ အတွင်းခံမှ မပါတာ……ကိုယ်ဟာကြီးက ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်လာတပေါ့………..။
မက ရေစပ်ကို လက်ညိုးထိုးပြတယ်……….
ကျနော်လည်း ရေကူးချင်လို့ သွားလိုက်အုံးမယ်နော်……………မ ကော မဆင်းဘူးလား ဆိုတော့ ရေကြောက်တယ်တဲ့…..။
ကျနော်လည်း ဟိုနှစ်ယောက် ရှိတဲ့ နေရာကို သွားပြီး ………… ဟေ့……..အထဲဆင်းရအောင်လေဆိုတော့
ရေမကူးတတ်ဘူးတဲ့………….ကျနော့် ချစ်လေးက တော့ သွားချင်ပုံဘဲ………….. ဟိုတစ်ယောက်ကလည်း လိုက်ချင်တယ်..
ကဲဒါဆို ငါလည်း နှစ်ယောက်တော့ တပြိုင်တည်း မထိန်းနိုင်ဘူး…တယောက်ချင်းဆီ ဆင်းကြဟာ…ဘောကိုင်ပြီး လိုက်ခဲ့ဆိုတော့
ူသူဇာက…………. သူအရင် ဆင်းမယ်တဲ့…..ကျနော်တို့ ရုံးမှာက တကယ့် အချောအလှတွေချည်း ခန့်ထားတာ
သူဇာက လည်း တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်………….သူ့ဝတ်ထားတဲ့ စကဒ်လေးကလည်း တိုတိုလေး.
အပေါ်က တီရှပ် အဖြူရောင်အောက်က ဘရာ ပန်းရောင်လေးအောက်မှာ ပုန်းနေတဲ့………. စနေနှစ်ခိုင်ကို စိတ်ထဲက မှန်းကိုင်ကြည့်တယ်.။
သူဇာကိုဘော ပေါ် တင်ပြီး……….. ရေ နည်းနည်း နက်တဲ့ နေရာထိ တွန်းသွားပေးလိုက်တယ်……..။
ရေနက်မှ လူလည်း ရှင်းတာလေ………..လူအများစုက ကမ်းခြေနားမှာဘဲ ဆော့ကြတာကိုး…..
ရေနက်ရောက်တော့…………ပက်လက်လေး ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ဇာကို စလိုက်တယ်……..
ငါထားခဲ့မယ်နော်………နောက်တစ်ယောက် သွားခေါ်လိုက်အုံးမယ် ဆိုတော့…………..
အကြောက်တလန့်နဲ့……..မလုပ်ပါနဲ့ အစ်ကိုရယ်တဲ့.ညီမ တကယ် ကြောက်လို့ပါတဲ့…….
အလကားစတာပါ ဟာ ဆိုပြီး ပါးလေး ဆွညှစ်လိုက်တယ်……။
ကမ်းခြေက ကျနော်တို့ကို သေချာ မမြင်ရလောက်တော့ဘူး……………….
ဒါနဲ့ သူ့ဇာကို သေချာ ထိန်းထားနော်.လှိုင်းစီးရအောင် ဆို………သူ့ဘောကွင်းကို အသာလေး ခိုထားလိုက်တယ်…
အနီးကပ် ကြည့်မှ….. သူ့ နို့လေးတွေက ပိုပြီး စို့ချင်စရာ ကောင်းလာသလိုဘဲ
ဒါနဲ့ လှိုင်းခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး လာတော့ .ချောလှဲရောထိုင်းပြီး………. သူ့ပေါင်ကြားထဲ ခေါင်းဝင်လိုက်တယ်………..
ရပါတယ်ကွာ ဆိုပြီး.ညည်း အသားလေးတွေက အိနေတာဘဲ………
ပေါင်လေးပေါ် ခေါင်းအုန်းပြီး အိပ်လိုက်ရရင်တော့ ဇိမ်ဘဲ…………..ဆိုတော့
လက်တဖက်ကလည်း ပြောရင်းနဲ့ ပေါင်လေးတွေကို မသိမသာလေး ပွတ်ပေးလိုက်တယ်……..။
သူ့ပေါင်လေး ဖြေးဖြေးချင်း ကားလာတော့……………….. လှိုင်း အလှုပ်မှာ အဖုတ်လေးပေါ် လက်တင်လိုက်တယ်…..
သူလည်း ကြည့်ရတာ အရသာ တွေ့နေပုံ ပေါ်တာနဲ့…….
စကဒ်အောက်ထဲ လက်ထည့်ပြီး…………. ပင်တီးလေးပေါ်က နေ ဖြေးဖြေး ချင်း ပွတ်ပေးလိုက်တယ်……….။
သူဇာက ခုမှ သေချာကြည့်မိတယ်…..တကယ့်မင်းသမီးလေးလိုဘဲနော်……
အသားကလည်း ညိုတာညိုတာ…………… ချောမွတ်နေတာဘဲ ဆိုတော့
အစ်ကိုက ဘယ်ကြည့်မှာလည်း…… သဉ္ဖာနဲ့ အစ်မကိုဘဲ ငမ်းနေတာကိုးတဲ့ ……စိတ်ဆိုးတဲ့ လေသံလေးနဲ့
ဟုတ်ပါဘူးကွာ…………အစ်ကို အလုပ်များတာလည်း သိရဲ့သားနဲ့………….
ကဲပါ …ကိုယ်လည်း စိတ်ပါလာပြီ သူဇာရယ်………………. ကိုင်ကြည့်မယ်နော် ဆိုပြီး
ခါးကို နည်းနည်း မ ခိုင်းပြီး………… ဘောအောက်ကနေ အဖုတ်းလေးကို အားရပါးက ပွတ်ပေးလိုက်
ဆားငန်ရေနဲ့ ဆိုတော့ ……. အဖုတ်လေးက အချွဲဓါတ်က ခဏလေး ပျောက်ပျောက်သွားတယ်…..။
ညကျမှ ကိုယ် အ၀ ပြုစုပေးတော့မယ်ကွာ…………..အခု သန္တာကို သွားခေါ်လိုက်အုံးမယ် ဆိုပြီး……. ။
သန္တာနဲ့ကတော့ တကြိမ် စားပြီးသား ဆိုတော့…….. ကစ်ဆင်လေး ဘာလေး ဆွဲပြီး……နည်းနည် ဆော့ပေးလိုက်တယ်…
အပြင်ရေပန်းမှာ ရေချိုးပြီး……ရေကူးကန်ထဲ ဆင်း…………ဘီယာ နဲ့ အားလုံးကြော် မှာပြီး စိမ်နေလိုက်တယ်.။
ခဏနေတော့ ………. မ ရယ် သူ့ညီမရယ်………… ကောင်မလေး နှစ်ယောက်……..လေးယောက်သား လိုက်လာကြတယ်.။
ကျေန်ာက ဘီယာသောက်တော့…….သူတို့ကလည်း သောက်ချင်တယ် ဆိုလို့ ကန်ဘေးမှာ ပုလင်းထောင်ပေးလိုက်တယ်….။
သူတို့ကတော့ ရေထဲ ဆင်းချင်ပေမယ့်….ရေကူးဝတ်စုံ မပါလို့……. ဆင်းလို့ မရဘူး….
သူတို့က အကျီအဖြူဘဲ ……. ခွင့်ပြုတာလေ…….။
မရေ….ညဘက် ဘာအစီအစဉ်ရှိလည်း ဆိုတော့……………
ကမ်းခြေမှာ ထွက်သောက်ကြမယ်တဲ့…..စားစရာတော့ အပြင်ကဘဲ မှာပြီး စားကြတာပေါ့ ဆိုတော့……
မချောလေးယောက် ကိုယ်တစ်ယောက်……………… ဒီည ကမ်းခြေဘက်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်….။
ဂီတာလည်း မပါတော့ ဖုန်းနဲ့သီချင်းလေး ဖွင့်ပြီး…………. နားထောင်ရင်း အာလူးဖုတ်ပေါ့……..
ညဘက် ကိုးနာရီလောက်ကြတော့………ခဏလေး toilet သွားချင်လို့ ဆို…အခန်းပြန်မယ့် ပုံစံနဲ့ မကို မျက်နှာရိပ် မျက်နှာကဲ ပြလိုက်တယ်
မ………….က…….ဟယ်ငါလည်း အမေတို့ အခြေအနေသွားကြည့်အုံးမှ……သူတို့ အိပ်ချင် အိပ်ဆိုပြီး သွားပြောလိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီး
မ………….. အမေတို့ကို ပြောပြီး မြန်မြန်လာခဲ့နော်
အခန်းထဲက စောင့်နေမယ် ဆို…….သူ့ကို ပြောပြီး အခန်းထဲမှာ အဆင်သင့်စောင့်နေလိုက်တယ်……။
ဘယ်သူတွေကိုဘဲ လုပ်ရ လုပ်ရ…………..မကို တော့ လုပ်ချင်နေတုန်းဘဲ…..
မလည်း အခန်းတခါးဖွင့်ရော……………. ချက်ခြင်း..သူ့ကို ဖက်….
ခုတင်ပေါ် ပက်လက် လှန်ပြီး………… ဂျာပေးလိုက်တယ်…………။
ပြီးတော့ တချီကောင်း အားရပါးရ လိုးပေးလိုက်တယ်….
မနဲ့က ခိုးလုပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး……သူက အရမ်းကောင်းလေး ပိုအော်လေဘဲ……..
ဒါကြောင့် ခိုးစားရတာ လူအတော်ရှင်းမှ အဆင်ပြေတာ………..။
လုပ်နေကြဆိုတော့ တစ်ယောက် အကြိုက် တစ်ယောက်သိပြီးသားလေ………ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် ကြာတေ့ တူတူ ပြီးလိုက်ပြီး
ဒီညက သူ့ဇာကို လုပ်ချင်တာ ဆိုတော့ သန္တာကို မူးအောင် တိုက်ရမယ်…………ဆိုမှ
သန္တာကလည်း တကယ့် ကြွက်တွင်း………..
ဘီယာ တကဒ်သာ ကုန်သွားတယ်…….သူက အေးဆေး……….မကလည်း သောက်နိုင်တယ်…
မရဲ့ ညီမနဲ့ သူဇာသာ သိပ်မသောက်ကြတာ…….ကျနော်တို့ သုံးယောက်က….. အရမ်း သောက်နိုင်တယ်…….
ကဲ ညီမလေးနဲ့ သူဇာ………… ဟိုတယ်က တစ်ယောက်ယောက်ကို ဘီယာ သွားဝယ်ခိုင်းလိုက်ဟာ
အခန်းထဲမှာ အစ်ကို ပိုက်ဆံအိတ်ရှိတယ်ဆို သော့ပေးပြီး…….. ခိုင်းလိုက်တယ်………..
သူ့တို့ နှစ်ယောက် ထွက်သွားမှ…….
ဘယ်လိုလည်း ဆရာလေး………. နေ့လည်က အရမ်းကောင်းလား………မကို သန္တာပြောပြလို့ အားလုံးသီပြီးသားတဲ့
သန္တာကတော့ ပြုံစိစိနဲ့ ကျမတို့ ဆရာက အလုပ်လုပ်တာတင် တော်တာ မဟုတ်ဘူး………….. ဒီကိစ္စလည်း ဆရာကြီးဘဲ…..
ဒီလို လုပ်ပါလား………2in 1 စမ်းကြည့်ရအောင် ဆိုတော့……………..
အားလုံးက ကောင်းနေပြီသားဆိုတော့ အိုကေပေါ့………….
ခက်တာက တစ်ယောက်ယောက် အိပ်မှ ဖြစ်မှာလေ……..ဒါမှ မဟုတ် ကမ်းခြေမှာ ထွက်လုပ်ကြမလား ဆိုတော့လည်း မဖြစ်ဘူး
မရဲ့ အော်သံ အကြောင်း ကျနော် ကောင်းကောင်းသိတယ်…………။
ဒါဆို မနက်ဖြန် စီစဉ်လိုက်မယ်…………
သူဇာရယ် ညီမတို့ မိသားစုရယ်ကို ကားနဲ့ ငွေဆောင်ဘက် ခေါ်သွားခိုင်းပြီး ငါတို့ သုံးယောက်နေခဲ့လိုက်မယ်ဆိုပြီး .မက အကြံပေးတော့ အိုကေပေါ့…..။
ဒီလိုနဲ့ ဆက်သောက်ကြတာ…………တိုက်ပွဲ အရင်ဆုံး ကျသွားတာက မ…….
သူတိုက်ပွဲကျသွားတော့ ……….. သုံးဗူးဘဲ ကျန်တော့တယ်………။
ကဲ………. သန္တာရေ….. ကိုယ်တို့ ဒါလေး ဖြတ်လိုက်ရအောင် ဆိုပြီး……….
သူ့ကို အတင်း ထိုးတိုက်လိုက်တယ်……။
ဘယ်ခံနိုင်မှာလည်းဗျာ…….ကိုယ်တောင် အတော်လေးကောင်းနေပြီ….မမူးတာဆိုလို့ မရဲ့ ညီမလေးးဘဲ ရှိတော့တယ်.။
ကဲ ပြန်ကြရအောင် ဆိုပြီး မကိုတဖက်စီ တွဲပြီး……..အခန်းပြန်ပို့…..
အထဲရောက်တော့………… အဝတ်လဲမယ်ဆိုပြီး သန္တာက အကုန်ချွတ်ချလို့………..သူဇာက ကွယ်ပေးထားတယ်………
ကိုယ်လည်း မသိချင်ယောင် ဆောာင် အပြင်ခဏထွက်နေပေးလိုက်တယ်………
ပြန်ဝင်လာတော့ သန္တာက ညအိပ်ဝတ်စုံလေး………….သူဇာက ရေချိုးခန်းထဲ အဝတ်အစားဝင်လဲနေပုံရတယ်….။
good night သန္တာ အိပ်တော့ နော်ဆိုပြီး …….သူ့နဖူးလေး နမ်းပေးလိုက်တယ်………….ပြီးတော့ တိုးတိုးလေး
အားမွေးထားဆိုပြီး ပါးလေး ညှစ်ပြောပြီး…………….ကိုယ်လည် အဝတ်အစား လဲလိုက်တယ်……….။
ခဏနေတော့………..သူဇာက ဟိုတယ်က ညအိပ်ဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီး ပြန်ထွက်လာတယ်…….
သူဇာတော့ မအိပ်ချင်သေးဘူး……..အပြင်ခဏထွက်ထိုင်အုံးမယ်ဆိုတောက…….ကိုယ်ကလည်း……. အိုကေပေါ့
အပြင်မှာ နှစ်ယောက်သား လေကန်ရင်းက အေးလာလို့ ဆိုပြီး သူ့ကို ဖက်ထားရတယ်..။
သူ့ဇာကို ဖက်ထားရင်းက……ကျနော်လက်တွေက အလိုက်တသိ……. လုပ်ရှားပေးလိုက်တယ်…………
အကျီပေါ်ကနေ……….နှို့လေးကို ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်ပြီး…..နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်း…….
ဖီးလ်ဝင်လာတော့မှာာ အောက်ဘက်ကို ဆင်းပြီး အဖုတ်လေးကို ကိုင်ကြည့်တော့…………..သူ့က အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုာတာ သိလိုက်ရတယ်……..။
အထဲလည်း မဝင်ချင်တာနဲ့…………… အပြင်မှာဘဲ…..ဆွဲဖို့ စဉ်းစားထားတာ…….
တခါမှလည်း လူမြင်ကွင်းမှာ မလုပ်ဘူးတော့ စမ်းကြည့်ချင်နေတာ…….။
ဒါနဲ့ သူ့ကို ဆွဲညှိလိုက်တယ်……………အထဲမှာ………. လူရှိတော့ အပြင်မှာဘဲ ဆွဲရအောင်ကွာဆိုတော့….
ထိုင်ခုံပေါ်ကနေ အောာက်ကို ဆင်းပြီး…………. သူ့ကို အပေါ်တက်ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်………..
သူ့အဖုတ်လေးက ချောဆီတွေကြောင့်…..ဒစ်ကြီးက အဖုတ်လေးထဲကို အသာလေး ဝင်သွားတာ……….
နည်းနည်းချင်း နဲ့လိုက်…….သူက ဇကောဝိုင်းလိုက်နဲ့……..ကျနော်လည်း အောက်က အသာလေး…….. အလိုက်သင့်နေပေးလိုက်တယ်
သူလည်း မလုပ်ရတာ ကြာလို့ ဖြစ်မယ်………………. ခဏလေး ပြီးသွားတယ်…………ဆံပင်ကို လက်မောင်းကို ကုတ်ပြီး အားယူလိုက်ကတည်းက သဘောက်ပေါက်လိုက်ပြီ………….။
ဒါနဲ့………………. ခဏလေး မှိန်းထားပြီး……..သူ့ကို နမ်းလိုက်………. ဟိုပွတ်သည်ပွတ်လိုက်နဲ့……..
ပြီးတော့ သူ့ကို ပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီး လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးလေး……လိုးရင်းက………… အားမရတော့ဘူးဗျာ
ပတ်ဝန်းကျင်လည်း ဂရုမစိုက်တော့……ဝရံတာကို လက်ကိုင်ခိုင်းပြီး……..ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ်……
သူ့ဂါဝန်လေးကို မပြီး……နောက်ကနေ ကစ်တာ……….
ကေငာ်ားလိုက်တာဗျာ…… စီးနေတာဘဲ……………သူ့ဖင်ကြီးက အားမလို အားမရနဲ့ ပြန်ပြန်ဆောင့်တာများ……
ပြီးသွားတော့ နှစ်ယောက်သား အထဲဝင်……… ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ပြီး…..သူ့အဖုတ်လေးကို ရေဆေးပေးလိုက်တော့……….
သူက အစ်ကိုက အရမ်း နူးညံ့တာဘဲနော်………….တဲ့
အဲဒီလို ပြောမှတော့…………….ကိုယ်ကလည်း..ဘယ်နေနိုင်မှာလည်း……….ပို အစွမ်းပြရတာပေါ့……..
အစ်ကိုကိုလည်း ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့………………. သူ့ပြုစုတာ ခံလိုက်တယ်………
သူ့လျှာစွမ်းလည်း မသေးဘူးးဗျာ……………..ဒစ်လေးကို လျှာလေးနဲ့ လျှက်တာမျာား…………ကောင်းလိုက်တာဗျာ……….။
ပြီးတော့ ဒုတ်ကို အားမရလို အားမရ ကိုင်ပြီး…… ထုလိုက်….ပါးစပ်လေးနဲ့ ငုံလိုက်………
အရမ်းကောင်းနေတော့ ပြီးသွားမှာ စိုးတာနဲ့……………….. သူ့ကို ချီလိုက်ပြီး……… ဘေစင်ပေါ်ကို တင်……………ပြူးထွက်နေတဲ့
ူထူးခြားတာ တခုက……သူ့အမွှေးလေးတွေက အတော် နူးညံ့သေးတယ်……..။
ဒါနဲ့……ကိုယ်လည်း သိပ်မစဉ်စာတော့ဘူး…………………. ဒစ်ကို အဖုတ်ထဲ့ ထည့်သွင်းလိုက်တယ်……..
လည်ပင်းလေးကို နမ်းပြီး……. နားရွက်လေးတွေ စုပ်ပေးလိုက်……ဆိုတော့ သူလည်း အရမ်းကောင်းနေပုံရတယ်
ဆောင့်ဆောင့် …..မြန်မြန်ဆောင့် ဆိုတာနဲ့……..စောင့်လိုက်တာ
အဖုတ်နဲ့ ဘောရိုက်သံ………..တပျက်ပျက်က……………… အကျယ်ကြီးဘဲ…..တော်သေးတယ်.
သူပြီးလို့ သိပ်မကြာဘူး…..ကျနော်လည်း လိုက်ပြီးပေးလိုက်တယ်……………
နောက် နှစ်ယောက်သား သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရင်း အိပ်ယာပေါ် ကိုယ်စီတက်လိုက်ကြတယ်……….။
ထပ်လုပ်ချင်သေးပေမယ့်……….သုံးယောက် တစ်ယောက်ဆိုတော့…..တကယ်လည်း သုတ်ရည်က ကျဲနေပါပြီ……..။
မနက်ခင်း အိပ်ယာက နိူးတော့….ဘယ်သူမှ မရှိတော့ဘူး..နာရီကြည့်တော့ ၉ နာရီခွဲနေပြီ……..။
ဒါနဲ့ မတို့ အခန်းဘက်ကို သွားကြည့်လိုက်တယ်…..အသံတော့ မကြားရ.
အားပါးပါး…………………. တမင်ကြံစည်ရင်တောင် ဒီလို မြင်ကွင်းမျိုး တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူးဗျာ.။
အဝတ်အစားလဲနေတာ………… ဘယ်သူမှ မရှိတော့…….ကိုယ်လုံးတီးလေးနဲ့
အတွင်းခံလဲနေပုံလေးက အခုထိ မျက်စိထဲက မထွက်သေးဘူး…..
ဖင်နှစ်လုံးကြားက နောက်ကို ပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်လေး…………………….. အတွင်းသားလေးတွေက
ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့လည်း မထိန်းနိုင်တော့ဘူးဗျာ………….
သူ့ကို နောက်က ဖက်ပြီး……….. လည်ပင်းလေးကို နမ်းလိုက်တယ်………
ချစ်မိသွားပြီကလေးရယ်…………..ကိုကို တကယ် မထိန်းနိုင်တော့ဘူး
ပြီးတော့ ခုဏကလို ပြန်ကုန်းခိုင်းပြီး………စက်ဖုတ်လေးကို အားရပါးရ ယက်ပေးလိုက်တယ်……
စက်ဖုတ်ယက်တာတောင် ကောင်မလေးက မခံနိုင်ဘူး…………….ဒူးလေးတွေ ကွေးကျလာတယ်…..
အချိန်လည်း သိပ်မရတော့………….. ကုတင်ကို လက်ထောက်ခိုင်းပြီး………… နောက်က ဖြေးဖြေးချင်း သွင်းပေးမလို့ဘဲ…..။
စော်ကဘဲ ကြပ်တာလား..ဇောကဘဲ ထန်နေလို့လား မသိဘူး.တော်တော်နဲ့ မဝင်ဘူးဗျာ………
ပက်လက် ပြန်လန်ခိုင်းပြီး……..လက်ညိုးနဲ့ အရင် လိုးပေးလိုက်တယ်…………ပြီးမှာ လက်ခလယ် အကူညီပါ ယူပြီး
ထွက်ကျလာတဲ့ အရည်တွေ…နည်းတာ မဟုတ်ဘူးဗျာ………..။
ခဏနေမှ ခေါင်းလေးတေ့ပြီး…………. ဖြေးဖြေးချင်း သွင်းပေးလိုက်တယ်……….
သူ့ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ အမိန့်တော် အတိုင်းဘဲ……..ကိုယ်လည်း မကြမ်းရက်ဘူး………..ဖြေးဖြေးချင်း မှေးလိုးပေးလိုက်တယ်..
သူက ကောင်းလွန်းရင် အံကြိတ်ပြီး ညည်းတယ်ဗျာ…………တကယ်ပါ…အခုထိ ဒီမြင်ကွင်းလေး မှတ်မိနေသေးတယ်..
အချိန်လည်း သိပ်မရတော့လို့ နည်းနည်းမြန်မြန်လေး လုပ်ရှားပေးလိုက်တယ်………သူလည်း နောက်တချီပြီးတော့မယ့် ပုံစံဘဲ
လက်မောင်းတွေကို အသားကုန်ဆွဲကုတ်နေတယ်…………ကိုယ်လည်း သူ့နဲ့ အပြိုင် ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ ခပ်သွက်သွက်လေးလုပ်ရှားပြီး
ပြီးတော့သူ့ကို ချီပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ခေါ်သွား………….စက်ဖုတ်လေးကို ရေဆေးပေးပြီး.ထပ်ဂျာပေးလိုက်တယ်………
ရန်ကုန်ရောက်မှ ထပ်ချစ်ကြမယ်နော်………….ဆိုတော့ …………သူက ရှက်လို့ ခေါင်းလေး ငုံ့ထားရင်း………..ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်.။
ခဏနေမှ…….. လိုက်ခဲ့နော်……..ကိုကို အရင်သွားနှင့်မယ်ဆိုပြီး အိနြေမပျက် ကမ်းခြေဘက်ကို လာပြီး မကို လိုက်ရှာနေမိတယ်..
မက ထိုင်ခုံလေးမှာ ထိုင်ပြီး ဘာစဉ်းစားနေတာလည်း မသိဘူး……….သူ့ဘေးနား ဝင်ထွက်ပြီး ……. စကားပြော
ဆယ်မိနစ်လောက်ကြတော့ သူ့ညီမ ရောက်လာတယ်
ဟဲ့အငယ်မ နင်ဘာလုပ်လို့ ကြာနေတာလည်း……….အမေတို့က ဟိုဘက်မှာ ဆိုပြီး
သူ့ညီမကို လှမ်းပြောတော့ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေရတယ်..။
မောင်…………… ညက ကောင်းရဲ့လား
ဟာကွာ………….မလောက်တော့ ဘယ်သူ့မှ မကောင်းဘူး….
မောင်ရယ်……….မတို့က ယူလို့ မရဘူးလေ…….
မောင်က တနေ့က မှကို ထားခဲ့မှာပါ……..
သူ့ကို ကြည့်ပြီး သနားသွားလို့ ဖက်ထားပြီး……………ပေါက်တတ်ကရတွေ မပြောပါနဲ့မရယ်
မောင်က မကို ထာဝရ ချစ်သွားမှာပါကွာ……။
ဒီလိုနဲ့ ရန်ကုန် ပြန်လာပြီးးရုံးတက်…………….. အလုပ်ပုံမှန်လုပ်ရင်း…………
မထင်မှတ်ထားတာတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်…။ ကျနော် မယုံကြည်နိုင်အောင်ဘဲ
မရဲ့ နှုတ်ထွက်စာကို ကြည့်ပြီး ကျနော် တကယ် အံ့သြသွားတယ်…။
သူ့ကို လှမ်းခေါ်ပြီး……….ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးမိတယ်……။
မ ဘာဖြစ်လို့ အလုပ်ထွက်မှာလည်း ဆိုတော့…….
မောင့်ကို ချစ်ပါတယ်တဲ့……… ဒါပေမယ့် လက်မထပ်ချင်ဘူး
မတို့က အရမ်းဆင်းရဲတယ်………….မောင့်မိဘတွေလည်း သဘောတူမှာ မဟုတ်ဘူး
ဒါကြောင့် မလည်း အခြား တစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်တော့မယ်တဲ့…….။
မိန်းမတွေဟာ သူတို့ဘာသာ သူတို့ စဉ်းစားပြီး စွဲချက် တင်တတ်ကြတယ်.
ပြီးရင် ဘယ်သူ့စကားမှ နားမထောင်ဘဲ သူတို့ဘာသာ ဆုံးဖြတ်တတ်ကြတယ်…………။
ကဲပါ…..မောင်နဲ့ ဝေးချင်လို့ အလုပ်ထွက်တာဆိုရင်တော့ ………..မ မထွက်ပါနဲ့
အမှန် အတိုင်းပြောရရင်…………မောင်က မ မရှိတဲ့ ဒီရုံးကြီးမှာ နေနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး……….။
ဝမ်းနည်း ကြေကွဲခြင်းဆိုတာ မိန်းကလေးတွေဘဲ ခံစားတတ်တဲ့ အရာလို့ သူတို့ ထင်ထားတတ်ကြတယ်………
ကိုယ့်နှလုံးသား ကွဲကြေခြင်းကို ငိုကြွေးခြင်းနဲ့ သရုပ်မဖော်တတ်တဲ့ ယောက်ျား အတွက်………………… ဝမ်းနည်းခြင်း အလျှင်းမရှိဘူးလို့
သူတို့ ထင်ခြင် ထင်နေကြမှာ………..။
ဒီလို လုပ်ပါ………… မောင် အခု ထွက်စာတင်လိုက်မယ်………
နှစ်လလောက်တော့ စောင့်ပေါ့ကွာ……………….. ။ မောင်……………. သွားပြီးမှ လက်ထပ်နော်……မမ ဆိုတော့
ငိုကြွေးထားတဲ့ မျက်ဝန်းတစုံက အံ့သြခြင်းမျက်နှာနဲ့ပေါ့…….။
ဒေါင်ကြကြ ပြားကျကျ ဘာမဆို ရင်ဆိုင်လို့ရတဲ့ ကျနော့်အတွက် အလုပ်မရှားပေမယ့်…..
မ အတွက်က ဒီလို နေရာ ရဖို့ မလွယ်ဘူးဆိုတ သူသိအောင်တော့ မပြောပြပေမယ့် သူနားလည်ပုံရတယ်…..။
နောက်ဆုံးနေ့၇က်ဆိုတာ သိတော့………အားလုံးက စိတ်မကောင်းကြဘူး..။
ကိုယ်တိုင် အစပြုခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီဆိုတော့……… အထက်ဆုံးကနေ အောက်ဆုံးထိ ကိုယ့်ကို ချစ်ကြတယ်.
ကိုယ်လည်း မခွဲချင်ပေမယ့်……….. ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့ သိပ်ကြည်ဘူး……။
တကယ်ဆို ဒီရုံးမှာက အတော်အသားကျနေပြီ………….မမ အပြင် အခြား နှစ်ယောက်လည်း ရှိတော့
လိင် ကိစ္စအတွက်လည်း အပြင်မှာတောင် ဝယ်စားစရာ မလိုဘူး…။
နိုင်ငံခြားက စာပြန်လာတယ်………….. နောက်လူ မရသေးခင် အထိ ကျေးဇူးပြု၍နေပေးပါတဲ့……
ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေကလည်း အလုပ်ကြီးတွေချည်းဘဲ……………. လိုက်ထားတဲ့ တင်ဒါတွေကလည်း တန်းလန်းကြီး..
လူမိုက်ကံကောင်းလို့ ပြောရမလား မသိဘူး………………ထွက်ခါနီးကြမှ တင်ဒါ တခုအောင်တော့……..
BOD အဖွဲ့က လစာထပ်တိုးပေးပြီး ကမ်းလှမ်းနေသေးတယ်..။
ကိုယ်ပိုင် အလုပ်လုပ်မှာ ဖြစ်လို့ .ထွက်ခွင့်ပေးပါလို့ဘဲ တောင်းပန်ထားရတယ်…
တင်ဒါအောင်တဲ့ အထိန်းအမှတ်……… သူတို့ကို Dinner လုပ်ပေးမယ်……… မ ရဲ့ ချစ်သူကိုလည်း မြင်ဘူးချင်လို့
2nd person ပါ တက်ခွင့်ပေးမယ်လို့ ကြေငြာထားလိုက်တယ်……။
Dinner ညမှာ………… ဂါဝန်လေး ဝတ်လာတဲ့မမ……သူနဲ့ လက်တွဲလာတဲ့ လူပုံကြည့်ရတာ
ကိုယ်ရဲ့ စားပွဲခုံဘေးမှာဘဲ ထိုင်ထားခိုင်းလိုက်တယ်……..။
ကိုယ်အမုန်းဆုံး အသိုင်းအဝိုင်းက လူကိုမှ ရွေးသွားတဲ့ မမကို နည်းနည်းတော့ စိတ်တိုသွားတယ်..
ဟိုဘဲကလည်း……..သူ့စော်ကို အပျို ထင်နေတုန်းဘဲ…….
ဒီကောင်တွေက ဘာမှ နားလည်တဲ့ ကောင်တွေမှ မဟုတ်တာ………ဘွဲ့ရ ရုပ်ချော…အလုပ်ကိုင် ကောင်းတဲ့ လူဆိုပြီးတာဘဲလေ.
နည်းနည်းတောာ့ ပညာပေးလိုက်အုံးမှဘဲ ဆိုပြီး……….
သူဇာတို့ကို တိုးတိုး တိတ်တိတ်မှာရတယ်…………….မမကို ဒီည ရအောင် ဆွဲထုတ်ခဲ့ဖို့.
သူဇာတို့ အဖွဲ့က မမရေ
ဒီည ကာရာအိုကေ ဆက်ဆိုရအောင်နော်……………….မပြန်နဲ့အုံး.ညီမတို့နဲ့ လိုက်ခဲ့ဆိုပြီး
အတင်းကပ်ချွဲတော့ မမက ကျနော့်ကို ကြည့်နေတယ်………ရိပ်မိပုံဘဲ…….။
ကျနော့် အကြိုက်ကိုသိတဲ့ မမက……. ဂဏန်းတွေ သေချာ နွှာပေးပြီး………..
အကျင့်ပါနေတော့လည်း ခက်သားဗျာ……..တခါတရံ မိန်းမတွေရဲ့ စိတ်က ခံစားရခက်တယ်.
သိပ်မကြည်ပေမယ့် လူကြားထဲ ဆိုတော့ ပြောလို့လည်း မကောင်းတော့.
ချစ် လိုက်သွားလိုက်လေ.တဲ့ အစ်ကိုဘာသာ ပြန်လိုက်မယ်…..
သူက အဲဒီလို ပြောတော့ ဘေးက လူတွေက ပြုံးတယ်
ဘယ်ပွဲတက်တက် ကျနော့်ဘေးမှာ ထိုင်ပြီး………. ပြုစုပေးတဲ့ မမကို ကြည့်ပြီး ကျနော် လည်း သနားမိတယ်..
မထင်ထားတာ လုပ်တတ်တဲ့ မမ………..ဘာလုပ်တယ်ထင်လည်း
ခြေထောက်နဲ့ ကျနော့် လီးကို လှမ်းပြီး ထအောင် လုပ်နေတယ်………။
ကျနာ် အိုင်ဒီယာ ရသွားပြီ………မမ ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာ…….
အပြန်ကြတော့ …သူဇာတို့ကားနဲ့ မမကို ထည့်ပေးလိုက်ပြီး…………… ကျနော်ဘာသာ ကျနာ် ပြန်လာပြီး လှမ်းခွဲလိုက်တယ်..
ကားပေါ်ရောက်မှ ဟိုတယ် နံမည် sms ပို့ပေးလိုက်တယ်…။
အခန်းထဲရောက်တော့ လက်ဆွဲတော်ဆေးလေး သောက်…………. လူးဆေးလေးပါ …..လူးထားပြီး အဆင်သင့်စောင့်နေလိုက်တယ်
ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် နေတော့………….. တံခါးခေါက်တာနဲ့ ထဖွင့်ပေးလိုက်တော့…
ငိုထားတဲ့ မျက်ဝန်းနဲ ကျနော့်ကို စိုက်ကနဲကြည့်ပြီး…… အားရပါးရ နမ်းတယ်…
လုပ်နေကြဆိုတော့ ပြောစရာ ကို မရှိဘူး.တစ်ယောက် အကြိုက် တစ်ယောက် သိပြီးသားလေ………….
အရှိရလာတော့…………..မမက ဖုန်းထုတ်ပြီး သူ့ဘဲကြီးဆီကို ဖုန်းဆက်တယ်..
စပီကာ ဖွင့်ထားပြီး ပြောတာ……….
ပြေတယ်……..ဒီမှာ ကာရာအိုကေ ဆိုရင်း သတိရလို့ ဖုန်းဆက်လိုက်တာ….
အဲဒီလို နေတုန်း လုပ်ရတာ အရမ်းဖီးရှိတာဘဲဗျာ………….
ကျနာ် ဖီးအရမ်းလာတော့ လီးက သံချေင်းကြီးလိုဘဲ……………..
မကို ကုန်းခိုင်းထားပြီး နောက်ကဆောင့်တော့………..မရဲ့ ကောင်းလွန်းလို့ ထွက်လာတဲ့ ရှိုက်သံဟိုဘက်က ဘဲကြီး ကြားတော့
မမ ကညည်းသံလေးနဲ အင်းပါ ဆိုပြီး….ပြော….လိုက်
မမရဲ့ နှုတ်ဆက်ခြင်း က တကယ့်ကို အရသာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်….
ပထမဆုံးဒီလို လုပ်ဘူးတဲ့ အတွေ့အကြုံဆိုတော့ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ………
ခွဲရမယ့်ရက်တွေ ပိုနီးလာလေ…………..မမကို ပိုချစ်လာသလိုဘဲ………
ဆုံးရှုံးတော့မယ်ဆိုတာ သိလို့………………… ပိုများ ချစ်လာတာလား……….။
နေ့စဉ်နှင့် အမျှ ကိုယ့်ဘေးမှာ နေပြီး………. လိုက်ပြုစုပေးနေတဲ့ ချစ်သူ တစ်ယောက်
မျက်စိအောက်က ပျောက်သွားမယ်ဆိုမှတော့……………… ဘယ်လို နေနိုင်မလည်း…….။
အခုရက်ပိုင်း မမ ………. နေတာထိုင်တာ ပြောတာဆိုတာက အစ…… တမျိုးကြီးဘဲ ဖြစ်နေသည်..။
အစည်းအဝေးပြီးလို့ အားလုံးပြန်သွားတော့………….မမနဲ့ ကျနော်… နှစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့တယ်.
မောင်ကို တကယ် မုန်းသွားပြီလား………။
မောင်ရယ်………………မမက မောင့်ကို အရမ်းချစ်တာ
မမက ချစ်ရင် တစ်ယောက်တည်း ပိုင်ဆိုင်ချင်တာ………..
မောင်က မမတစ်ယောက်တည်းနဲ့ မတင်းတိမ်နိုင်တာမမလည်း သိနေတာဘဲ…..
ကိုယ့်မိုက်ပြစ်နဲ့ ကိုယ်ဘဲလေ…………..အရင်က မမနဲ့လည်း အပျော်ဘဲတွဲမယ်လို့ စိတ်ကူးထားခဲ့တာ
မမ နှုတ်ထွက်စာ မတင်ခင် အထိ…..သူ့ကို အရမ်း ချစ်နေမှန်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် မသိခဲ့ဘူး…………။
အခုလို ချစ်မိသွားတာကလည်း အနေနီးတဲ့ သံယောဇဉ်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်……….။
မောင် နောက်အပါတ်ဆို သွားပြီနော်…………….။
မမ အတွက် အားလုံး အစဉ်ပြေအောင် စီစဉ်ထားခဲ့တယ်……။
ကျနော် အရမ်း အတ္တကြီးတယ်ဗျာ………..
နောက်လူက ယောက်ျားလေးဆို ….မမနဲ့ ချစ်သွားမှာ စိတ်ပူလို့ မိန်းကလေး မရရအောင် ရှာခဲ့တယ်…….။
ကိုယ့်နေရာမှာ အစားထိုးပေးဖို့ ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက် ရှာခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီက လူကြီးတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရမယ်..။
အင်တာဗျူးမှာတုန်းက………………… လစာ ၃၀၀၀ လောက်ပေးမယ်လို့ ကြောငြာထားတော့
အင်တာဗျူး ဝင်ဖို့ အတွက် CV တခုတည်းကို ကြည့်ပြီး ဆယ်ရောက်လောက်ကို ဆန်ကာတင် စားရင်း ရွေးလိုက်တယ်………။
( CV တခုဟာ လူတစ်ယောက် အတွက် အရမ်း အရေးပါပါတယ်.
ဓါတ်ပုံဆိုလည်း အလှဆုံးပုံလေး ရိုက်ပြီး ကပ်ထားပါ….
ဒါမှ ကိုယ့်လို နှာဘူး ကျတဲ့ မန်နေဂျာတွေက အင်တာဗျူးခေါ်မှာလေ………..။
အင်တာဗျူး လုပ်တဲ့ အခါလည်း မရှက်ပါနဲ့…မကြောက်ပါနဲ့……………တချို့က Psycho မေးခွန်းတွေပေါ့……။
မင်းကို ယောက်ျားလေး တစ်ယေက်က အပြင်မှာ ဒိတ်မယ်လို့ ရုတ်တရက် ပြောရင် ဘယ်လို ခံစားရမလည်း..။
ညဘက် ပါတီတွေ တက်ဘူးလား……..
တစ်ယောက်တည်း ခရီးသွားရတာ နှစ်သက်ရဲ့လား……..
ခေတ်ကို ဘယ်လို မြင်လည်း………
အရက်.ဘီယာ တို့ သောက်ဘူးလား…………… အရသာ ဘယ်လို ရှိလည်း……..
ကျနော်ကတော့ စုံနေအောင် မေးတာဘဲ…
တချို့ကတော့ အားလုံး Pure………. တဲ့….. ။ အမှန်မှာက ညာလိုက်တာပါ.
တချို့ကြတော့လည်း အဲဒီမေးခွန်းမျိုး မေးလိုက်တာနဲ့ ရှက်သလိုလို ခံစားနေကြတယ်.။
အင်တာဗျူး ပြီးလို့ လက်လေး ကမ်းပေးရင်အောင် Shake မလုပ်ရဲတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယေက်ကို
အင်တာနေရှင်တယ် ကုမ္ပဏီမှာ……… Business development manager ရာထူး ဘယ်လို ပေးမလည်း.။
ခရီး တစ်ယောက်တည်း တော့ မသွားရဲတဲ့လူတွေလည်း အဆင်မပြေပါဘူး…….။
သတ္တိရှိကြစမ်းပါလို့ ဒီနေ့ ခေတ်လူငယ်တွေကို ပြောချင်တယ်…….။ စေတနာစကားပါ )
အချောဆုံး………… ဆက်ဆီ အကျဆုံး…အသွက်ဆုံး သုံးယောက်ကို ရွေးထားပြီး…..
တစ်ယောက်ကတော့ ဆင်းရဲတယ်….ပညာမာနလည်း ရှိတယ်…….အရင်က ဟိုတယ် Life လည်း လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့
အရမ်းသွက်ဘဲ…….။ သူလက်ရှိ အလုပ်က သူ့ပညာအရည်အချင်းနဲ့ တကယ် မတန်ပါဘူး……တလမှ ၇၀၀ လောက်ဘဲ ပေးတာဆိုတော့.
မမနဲ့ တိုင်ပင်တယ်…….ဘယ်သူ့ကို ရွေးမလည်း ဆိုတာပါ..။
အရေးကြီးတာကို မမ အပေါ်ကို နားလည်ပြီး လုပ်ငန်းမှာ အဆင်ပြေမယ့်သူကို ရွေးပေးခဲ့နိုင်ရင်…………တာဝန်ကျေပါပြီ……။
ကိုယ်ကလည်း အဆင်မပြေသူ ကို ပိုသနားတတ်တာဆိုတော့..မမတုန်းကလိုဘဲသူ့ကို ရွေးပြီး
ညီမ ဒီနေ့ ညနေ အားလား………..အစ်ကိုနဲ့ တစ်ခုခု သွားစားပြီး အလုပ်ကိစ္စလေး ဆွေးနွေးချင်လို့ ဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ဆိုတာနဲ့..
ညနေပိုင်းရောက်တော့သူ့ကို ချိန်းထားတဲ့နေရာက စောင့်နေလိုက်တယ်…….။
သူ့အသက်က ၂၉ လောက်တော့ ရှိပြီ…….. ။
….. အသားကလည်းမမလိုဘဲ ဝင်းဝင်းလေး
မျက်နှာလေးက………….. လည်း သက်မွန်မြင့် ပုံစံလေး……….။
သူ့မျက်လုံးတွေက သိပ်မတောက်ပဘူး…………။ တစုံတခုကြောင့် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ ပုံစံမျိုးလေး
အဲဒီလို မျက်ဝန်း ပိုင်ရှင်တွေက…… ဘ၀ နာခဲ့သူတွေ
ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ အဖေ.သို့မဟုတ် အမေ ဆုံးပါးသွားခဲ့သူတွေ ………မှာသာတွေ့ရတတ်တဲ့ မျက်လုံးမျိုး.
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားတင်းတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ပြုံးတတ်ကြပေမယ့် ……………..သူတို့ အပြုံးက အရမ်း မတောက်ပဘူး.
ဆက်ဆီ တော့ ကျတယ် ပြောရမယ်….လုံးဝန်းနေတဲ့ တင်ပါးလေးရယ်
ရင်သားလေးပေါ်မှာ အကွက် အသေးလေးတွေ မြင်ရတဲ့ အတွက်
ူသူဟာ ရေချိုးခန်းမှာ အမြဲ ရေချိုးခဲ့သူ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာတယ်..
အလှကုန် ပစ္စည်း အကောင်းစားတွေ သုံးစွဲတတ်သူ မဟုတ်ဘူး……….။
သူ့ကို ကြည့်ရင်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် စဉ်းစားမိတယ်……ငါတောင် beauty advisor လုပ်လို့ရနေပြီလို့..။
( ဒါနဲ့သတိရသွားတာက မယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ စော်တွေ………….. ဒူးတွေ ညိုနေတာ သတိထားမိလား……..
သေချာတယ် အဲဒီစော်က ဆင်းရဲရင်……….အိမ်မှာ ကြမ်းတိုက်ခဲ့လို့
ချမ်းသာတဲ့ စော်ဆိုရင်တော့ ………….သေချာတယ် အဲဒီဆို Doggy ကို အရမ်းကြိုက်တယ် ဆိုတာ…မယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ရင် သတိထားကြည့်ကြပါ. )
သူနဲ့ ထိုင်စကားပြောရင်း…..သူ့ဘ၀ အကြောင်း ပိုသိလာတယ်.။ ပိုပြီးလည်း သနားလာမိတယ်..
အဖေက ငယ်ငယ်လေးနဲ့ သူ့အမေကို ထားခဲ့ပြီး နောက်မိန်းမ ယူလိုက်တယ်..
အမေကလည်း……….ငွေရေးကြေးရေး အဆင်မပြေတော့ ……….. အသက်ခပ်ကြီးကြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ Sponsor သဘောမျိုးနေခဲ့ရတယ်……။
သူတို့ မောင်နှမတွေက ကျောင်းပိတ်ရက်ဆို ကိုယ့်မုန့်ဖိုး ကိုယ်ရှာရင်း ကြီးပြင်းလာတာ……
သူက အချစ်ဆိုတာ ကို အယုံအကြည် မရှိသူ…………..ဖြစ်နေတယ်.
အဖေနဲ့ အမေက သင်ပေးလိုက်တဲ့…………. ခံစားချက်ပေါ့….။
သူ့ထက် ငယ်တယ်…………….. တခါတခါ စိတ်ပါရင်တော့ လိုက်လျောတယ်…………ဒါပေမယ့်
အဲဒီကိစ္စကို သူက သိပ်ဖီးလ်မလာဘူး…………. သူများတွေ ရည်းစားထားတယ်ဆိုလို့ ထားလိုက်တဲ့ သဘောဘဲတဲ့.
အနေအထိုင် ရိုးပေမယ့် အပြောအဆို ပွင့်လင်းတာကို သဘောကျတယ်
အစ်ကိုကိုလည်း အရမ်း အားကိုးပါတယ်….ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီအလုပ်လေး ရအောင် ကူညီပေးပါ.
ညီမ ကျေးဇူး မမေ့ပါဘူးတဲ့……………ညီမ မိသားစုကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေး ထားချင်လို့ပါတဲ့..။
အခုချိန်ထိ သူ့မောင်လေးနဲ့ သူ့ညီမလေးကို …… သူကဘဲ ကျောင်းထားပေးထားတာ
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား နှစ်ယောက်နဲ့ အမေလည်းပါ…အိမ်ကလည်း ဌားရ တလကိုရတဲ့ လစာ ၇ သိန်းက မလောက်ချင်ဘူးတဲ့.
ကိုယ်ကလည်း သနားတတ်သူ မဟုတ်ဘူး……..။
ကဲ ကိုယ်တို့ စကားကောင်းနေလိုက်တာ…….
မင်း ရုံးတက်ဖို့ အဝတ်အစား သွားဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့ သူအံ့သြသွားတယ်……
ကိုယ် မင်းကို အလုပ်ခန့်လိုက်ြ့ပီ……
ကိုယ်နဲ့ တူတူ အဝတ်အစား သွားရွေးရအောင်…………. ဆို
သူ့ကို ခေါ်ြ့ပီး………… ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက် လိုက်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်…..
အပြန်မှတော့ သွေးတိုးစမ်းတဲ့ သဘောနဲ့…………..
ကိုယ်လေ……..မင်းကို မြင်မြင်ချင်း သံယောဇဉ် ဖြစ်မိတယ်ကွာ……။
ရင်ထဲမှာာ တမျိုးကြီးဘဲ…….ဒါကြောင့် မင်းကို ဦးစားပေးလိုက်တာ….။
ကိုယ်အခု ခံစားချက်ကို ပြောပြရရင်……………. မင်းကိုယ် ကိုယ် အခု ဝယ်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ မင်းနဲ့ လိုက်မလိုက် ကိုယ်တိုင် ကြည့်ချင်တယ် သိလား……….။
အစ်ကို ဆန္ဒရှိလို့လား………….. ညီမလည်း ဒီနေ့ နည်းနည်းတော့ စိတ်ပါသလိုဘဲ….။
သူ့ဘက်က မီးစိမ်းပြမှတော့…………….ကိုယ်လည်း ဘာနေနိုင်မှာလည်း
နီးစပ်ရာ ဟိုတယ် တစ်ခုကို မောင်းခိုင်းပြီး………..ကားပေါ်မှတော့ Driver ကြားအေင် မီတင် ကိစ္စ ပမာ ဟန်ဆောင်ကြတာပေါ့..။
ဟိုတယ်ရောက်တော့……………… သူ့ကို တခါတည်းနမ်းပြီး……..
အဝတ်အစားလေးတွေ ကိုယ်တိုင် ချွတ်ပေး………………..
သူ့က နူးညံ့တာ ကြိုက်တဲ့ ပုံလေးဗျာ…………….။
ဖြေးဖြေးချင်း ချွတ်ပြီး……….မှ အဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးလိုက်.
ပြီးမှ ………………. စက်ဖုတ် အတွင်းသားလေးပေါ်အောင် …. ဖြဲပြီး လျှာာလေးနဲ့ အားရပါးရ ယက်ပေးပြီး
သေချာတယ်……..သူတခါမှ အယက်မခံဘူးသေးဘူး……………. အရည်တွေလည်း ချွဲနေတာဘဲ…..
ခဏနေတော့ ကိုယ်လည်း မနေနိုငလို့ ……… ဒစ်လေး တည့်ပြီး ထည့်လိုက်တာ…….
ခဏနေတော့ ငြိမ်ကျသွားပြီး……ညည်းသံလေး ပါလာတယ်.
ချွေးလေးတွေ စို့နေတဲ့ သူ့နဖူးလေးကို နမ်းလိုက်
နို့လေးကို စို့ပေးလိုက်နဲ့………………..တကယ်ကို ကောင်းဗျာ………… ။
တချီပြီးတော့ ခဏနားလိုက်ပြီး……………….. စကားပြောဖြစ်တယ်
သူ့ဘဲနဲ့ လုပ်ဘူးတယ်ဆိုတာ…………….. ခိုးလုပ်ကြတာတဲ့
ှနှစ်ယောက်လုံးက ပိုက်ဆံ မရှိတော့ ဟိုတယ်လည်း မသွားနိုင်……
သူ့အိမ်မှာ လူပြတ်တဲ့ အချိန် ခိုးလုပ်ရတာဆိုတောကဒီလို အရသာ မရှိဘူးတဲ့
နောက်ပြီး သူ့ဘဲ လီးက သေးသေးလေးတဲ့………
သူပြောလည်းပြော….ရီလည်း ရီနေပုံက ချစ်စရာလေး………….။
ခဏလေးနဲ့ ရင်းနှီးပြီး ချစ်သလို တောင် ဖြစ်သွားမိတယ်………….။
သူနဲ့ အဲဒီနေ့က သုံးချီလေက် ဆွဲဖြစ်ခဲ့တယ်……….။
နောက်ဆုံး အပါတ်ဆိုတော့……………………….. မမကလည်း အနားကကို မခွာဘူး…..
နေ့ခင်း ထမင်းစားသွားချိန် လူရှင်းတော့ ……………..အခန်းထဲဝင်လာပြီး………
ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ဗျာ…………….. ကျနော့်ကို အတင်း မှုတ်တာဘဲ………။
အရသာ တကယ်ရှိတယ်ဗျာ……………..ပြီးတော့ စားပွဲပေါ် ပက်လက်လှန်ပြီး
သူ့စောက်ဖုတ်လေးထဲ ကျနော့်လီးကို ထိုးထည့်ခိုင်းပြီး…………..
ခဏနေတော့ ………..ဖုန်းဖွင့် …….သူ့ဘဲကြီးကို ဖုန်းခေါ်ပြီး
ဟိုဘက် ဟယ်လို ဟယ်လို ချစ်လား နဲ့ ပြန်ထူးတော့ မကိုင်ဘူး
ကျနော့်ကို မေးငေါ့ပြပြီး အရမ်း စောင့်ခိုင်းတယ်……….
သူ့အော်သံကြားမှာ ဆိုးလို့ …………
ပါးစပ်ကြီး အတင်းစေ့ပြီး ညည်းနေပုံက ပို ပြီးဖီးလာတယ်ဗျာ……..။
အခြားစော်တွေ ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း ….မမကို လိုးရတာတော့ တကယ် အကေငာ်းဆုံးဘဲ.
အဓိက က သူက လီးကို ညှစ်တတ်တယ်……လီးပိုဝင်အောင် အောက် နေပေးတတ်တယ်………။
လုပ်နေရင်း ဖုန်းထပိတ်………..ပြီးတော့…………… သူက…..
ဟိုဘက်က ဘဲကြီးက hello hello နဲ့ပြောလိုက်……..
တချီပြီးသွားတော့ အပြင်ထွက် ထပ်ခေါ်ပြီး……………….ဖုန်းလိုင်းမကောင်းလို့ ဘာလို့ ပြောပြီး နူးလိုက်တယ်..
မောင်က ဒါမျိုး ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ……….မမ က အကောင်းဆုံးပြု စုတာနော်…
မမလည်း ဒီလူနဲ့ ယူပြီးသွားရင်တော့…………… မောင်ကို အခုလို ပြုစုနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်…………
မမ သူ့ကို လုံးဝမချစ်ဘူးကွာ……….မေမေတို့ဘက်က အမျိုးတွေက အတင်းဝိုင်းပေးစားကြတာ.
မမလည်း မငြင်းချင်တာနဲ့ လက်ခံလိုက်တာ………..။။
မမကို တခု လောက် ကူညီပေးပါလား………………မောင့်နဲ့ ရတဲ့ ရင်သွေးလေး မမ မွေးချင်တယ်……..။
မလုပ်ပါနဲ့ မမရယ်……..မကောင်းပါဘူး…….မောင် အဲဒီလောက်ထိ သူတပါးကို မရက်စက်ချင်ဘူး.
နောက်ပိုင်း သွေးက စကားပြောလာရင်……….. မမဘဲ စိတ်ညစ်လာမှာ………။
မမကိုလည်း တကယ် လက်ထပ်ချင်တာပါ…….
မောင် တစ်ယောက်တည်းနဲ့ အားမရတာတော့ အမှန်ဘဲ.
အဲဒီ စိတ်ကိုလည်း မောင်ပြင်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်………….။
မောင်က ယောက်ျားကောင်း မဟုတ်ပါဘူး……
အတင်းလာမကျွေးလည်း လိုက်ရှာစားနေတဲ့ ကျားဆိုး တစ်ကောင်ပါ………….
အရမ်းချစ်တယ်…………………ဆို ပြောပြောဆိုဆိုတဲ့…………. နမ်းလည်း နမ်းလိုက်ရော
မမက…………..ဟိုဘက် လှည့်သွားပြီး………..စကဒ်လေး လှန်ပြီး
ဒါနောက်ဆုံးဘဲနော်…………….မောင်ဆိုတဲ့ မျက်ဝန်လေးကို လွမ်းနေရုံမှ တပါး ……
ချစ်တတ်သူတွေ ချစ်ခွင့်ကို ချစ်သူနဲ့ ရကြပါစေ….
ရေးသူ = smartboygyi